ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: တောင်တွင်းကြီး သမိုင်း မြန်မာ့ သမိုင်း ၃ Myanmar History in Taung Twin Gyi
တောင်တွင်းကြီး သမိုင်း မြန်မာ့ သမိုင်း ၃ Myanmar History in Taung Twin Gyi
မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူသည်နောက်သုံးလမြောက်တွင် အဇာတသတ်မင်းနှင့့််ကဿပရဟန္တာအ၇ှင်မြတ်တို့ အဋ္ဌ်ဇယအစ်၊ သက္ကရာဇ်(၁၄၈) ခုကိုနှစ်ခုအကြွင်းထားလျက်ဖြိုတော်မူသည်။ ယင်း သည့်နောက် နှစ်ပေါင်း ၆၂၂ ခုရှိသောအခါ သရေခေတ္တရာပြည်တွင် ငတပါးမင်း၏ အဆကပဉ္ဓ ကိန်းဖြင့် အကြွင်းနှစ်ခုထားကာဖြိုတော်မူသည်။ ယင်းသက္ကရာဇ် နှစ်ပေါင်း ၁၉၁ ခုတွင်မှ မင်းပြောင် မင်းရောင် မင်းနောင် မင်းနဂါးညီနောင် လေးပါးတို့ ကာလိင်္ကရာဇ်ပြည်ကလာ၍ တောင်တွင်း ကြီးမြို့ကို ထပ်မံအသစ်တည်ထောင်သည်။
ဤစကား ၌ ... .တောင်တွင်းကြီးသို့ ပထမတည်ရင်း သာဂရမင်းမှစ၍ (၉) ဆက်သောမင်းတို့ တည်ထောင်စံနေကြသည်။ ။နှစ်ပေါင်းလေးရာကျော်ရှိမှ ဗိဿနိုးမြို့ကို ပန်ထွာမိဖုရား တည်ထားစံနေသည်။ ထိုဗိဿနိုးမြို့ ပျက်ပြားသည်နောက် နှစ်ပေါင်း (၁၂၇၁)နှစ် ရှိမှ၊ မင်းပြောင်လာရောက် တည်ထောင်သည်။ ဤသည်လျှင် သတိထား မှတ်သားရန် စကားချပ်တည်း။
မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော် ၁၃၇၃ သက္ကရာဇ် ၁၉၁ ခုတွင် မဇ္ဈိမဒေသဖြစ်သော ကာလိင်္ကရာဇ်ပြည်မင်းကြီး၏ မိဖုရားခေါင်းကြီး တွင် မင်းပြောင်၊ မင်းရောင်၊ မင်းနောင်၊ မင်းနဂါးဟူ၍ သာ့းတော်လေးပါး ၊မယ်စောအမည်ရှိသော သမီးတော် တစ်ပါး ပေါင်းငါးပါးကို ဘွားမြင်ပြီးနောက် မယ်တော် မိဖုရားကြီး နတ်ရွာလွန်လျှင်- ပဥွ့ကလျာ အမည်နှင့် ဣနြေ္ဒမူလ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကိုယ်လုပ် တော် တစ်ယောက်ကို မိဖုရားမြှောက်ရာတွင် စန္ဒအမည်ရှိသော သတို့သားကိုဖွားမြင်လေ၏။
တရံရောအခါ ပြည့်ရှင်မင်းအား တူတော်ဖြစ်သောသေနက စစ်သူကြီးသည် အဆိပ်ခတ်သော ပျားမုန့်ကိုပို့ဆက်လှာ၏။ မင်းကြီး လည်း ကောင်းနိုးထင်ကာ ပွဲတော်တည်မည်ရှိရာ- ပဥွ့ကလျာ မည် သော မိဖုရားသည် ဤသို့ လျှောက်၏။ အရှင်မင်းကြီး မင်းတို့မည်သည် ကြဉ်ရှောင်ရာသော အကြောင်း ငါးပါးရှိပါသည်။ ငါးပါးဟူသည်ကား....
၁-အခြားသူတို့ဆက်သသော အ၀တ်အစားကိုမစူးစမ်း မူ၍ မ၀တ်မစားရသည် တပါး။
၂-အ၀တ်ပုဆိုးတင်သောကြိုး ၊ကြိမ်တန်းအောက်သို့ မလျှိုမ၀င်ရသည်တပါး။
၃-ရာသီပန်း ပန်သော ကိုယ်လုပ်မောင်းမတို့နှင့် မွေ့လျော်ခြင်းကိုမပြုရသည်တပါး။
၄-အရက်သေစာ မကျူးရသည် တပါး။
၅-ချမ်းသာခွင့်ရောက်အောင်၊ မစချီးပင့်ပေးသောသူ၊ ရန်ကိုတားမြစ်နိုင်သောသူ၊ အသက်ဘေး ကိုကယ်ဆယ်ဘူးသော သူတို့ကို အသက်မသေစေရသည်တပါး။
ဤသည်လျှင် မင်းတို့ရှောင်ကြဉ်ရာသော တရားငါးပါး ဖြစ်ပါသည်။. ယင်းသို့ဖြစ်၍ ယခုဆက်ကပ်သော စားတော်တွင် အခွင့်ပေးတော်မူပါလျှင် အနည်းငယ်မျှသော စားတော်ကို ကျွန်တော်မ စားပါ ရစေဦးဟု၊ တင်လျှောက်လေလျှင်... မိဖုရားကို မစားစေဘဲ ၊ကြောင်-ခွေး အစရှိသည်တို့ကို ကျွေးရာ၊ စာ့းသောခဏတွင် လတ်တလောသေလေ၏။ သေနကစစ်သူကြီး ကိုလည်း နန်းကြမ်းပြင်တွင် ကွပ်မျက်တော်မူလေသည် ။ပြည့်ရှင်မင်းသည် အသက်၏ချမ်းသာခြင်းကို အကြိမ်ကြိမ်အောက်မေ့တော်မူပြီးမှ မိဖုရား၏ကျေးဇူးသည်မိမိ၏ အသက် ကိုသေစေ၍ ငါ၏အသက်ကို ရှင်အောင် အကျိုးဆောင်သူဖြစ်ပေသည် ဟု ကျေးဇူးကြီးမားလှသော မိဖုရားအား ကြိုက်နှစ်သက်သောဆုကို ယူလော့ဟု ခွင့်ပေးတော်မူ၏။ မိဖုရားလည်း အခြားသောဆုကို အလိုမရှိပါ သားတော်ငစန္ဒကို သူကောင်းပြုတော်မူပါဟု လျှောက်ထားလျှင်-သားကြီးများပင်ရှိငြားတုံ့သော်လည်း အသက် ချမ်းသာအောင် ကယ်ဆယ် သတိပေးသူဖြစ်သောကြောင့် သားတော်ငစန္ဒကို နန်း လျာဆု ပေးတော်မူ၏။ ခွင့်ပေးတော် မူပြီးနောက် - အထက် သားတော်လေးပါးကို့ခေါ်၍ အမောင်တို့၊... ညီတော် ငစန္ဒ ကို သင်းအမိကျေးဇူး၊ အထူးကြီးမားသည်ဖြစ် ၍ နန်းဆုပေးရန် ရှိလေပြီ။ သားတော်တို့ ဤတိုင်း ဤ ပြည်တွင် နေလျှင် ရန်စစ် များစွာဖြစ်မည်။ ဘေးတော်ဖြစ်သော ဥက္တာမုခမင်းတို့ကဲ့သို့ အလိုရှိရာ လက်နက်ဆင်မြင်းသင်းပင်း ကျေးကျွန်တို့ကို ယူဆောင်ကာ တောတောင်သန့်ရှင်း၊ ခင်းကျင်းသာယာ စည်မျက်နှာကဲ့သို့ညီညာသော အ၇ပ်သို့ သွားပြီးလျှင် ခမည်းတော် စံနေသော တိုင်းပြည်နှင့် အတူ မြို့ရွာ ထီးနန်း၊ တည်ထောင်ပြုစုစံနေကြလေလော- ဟု အမိန့်တော်၇ှိလျှင် သမီးတော် မယ်စော လည်း မောင်တော်များနှင့် အတူ ရေပူရေချမ်း ၊ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါ လို့ကြောင်း အခွင့်တောင်းသည်ကို ခွင့်ပေ့းတော်မူလေ၏။
သားတော်တို့သည်လည်း ရွှေနန်းရာဇပလင် ၊ဦးကင်တော်ဦးတွင်၊ ခမည်းတော်ဘုရား၊ ကိုးကွယ်၍ ထားသော သရီရဓာတ်တော် တနာဋိက နှင့် ရတနာပြောင်မွန် ဆင်တော်ကို တင်လျှောက်တောင်းယူ ပြီးလျှင် ခမည်းတော်အား ရိုသေလေးမြတ်စွာ ကန်တော့ကြပြီးမှ မောင်နှမငါးယောက် မှူးမတ် ဗိုလ်ပါ နှစ်သောင်း (၂၀၀၀၀) တို့နှင့် ဆင်တော်တွင်သရီရ ဓာတ်တော်များကို န၀ရတ်ကိုးပါးဖြင့် ပြွမ်းသော ရွှေပန်းတောင်းတွင် ထည့်ကာ ခရီးရှေ့ညွှန် ထားပြီး လျှင် ဆင်တော်နောက်မှ အစဉ်အတိုင်း လိုက်လာခဲ့ကြရာ ဇမ္ဘူဒီပါကျွှန်းအ၀င် ဒွါရာဝတီမြို့၏ အနီးတပ်တော်ဆိုက်ရောက် စွဲရပ်၊ ချနေတော်မူပြီးလျှင် ထိုပြည် ၌ စန္ဒသူရိယမင်း သွန်းလုပ် ကိုးကွယ်တော်မူသော မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကို ၀တ်တက်၊ နေ့ဆက် လှူဒါန်းတော် မူသည်။
ဒွါရာဝတီမင်းလည်း မှူးမတ်တော် မတ်တော်တို့ကို ထောက်လှမ်း ကြည့်ရှုစေရာ မင်းသားတို့၏ မူလ ဘူတမဇ္ဈိမဒေသ၊ သာကိရမင်းမျိုး၊ ဘုန်းတန်ခိုး ကြက်သရေ၊ အခြေ အမြစ် ရှိသည်၏ အဖြစ်ကို မှူးမတ်တို့ တင်လျှောက်ကြားသိ ၊ နှစ်သက်ခြင်း ရှိတော်မူကာ၊ သမီးတော်နုမာလာကို ထိမ်းမြားတော်မူ သည်။ ဒွါရာဝတီပြည် သင့်ရာ ရပ်ကွက်တွင် လည်း မြို့နန်း တည်ထောင် စံနေရမည်ပြောဆိုရာ ၊ တစ်တိုင်း တစ်ပြည်တည်းတွင်နှစ်ထီးနှစ်နန်း မပြုလုပ်လိုပါ။ အရှေ့တောင်ရိုး အခြားတဘက် သင့်ရာကွက်ရပ်တွင် မြို့နန်း ပြုစုနေထိုင်ရလျှင် ဒွါရာဝတီပြည်ကို အခြား၇န်သူများ ၀ံ့တော်မည်မဟုတ် ဖြစ်ပါသာကြောင့် ဖိုးခေါင်တောင်ရိုး အရှေ့ရောက်အောင် သွားလိုကြောင်းနှင့် ခွင့်တောင်းပြောဆိုသောကာလ_ ကိုးကွယ် ပူဇော်ရန် ဓာတ်တော် ဆူရေတစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ၁၂၀ ကို ထပ်မံပေးအပ်တော်မူလိုက်သည်။
မင်းသားတို့လည်း ဒွါရာဝတီမင်းအား များစွာသောလက်ဆောင် လက်နက်တို့ကို ဆက်ပေးလျှင်- တိုင်း ရေးပြည်မှု ၊ပြုစုတည်ထောင်ရန် များသေးသည် တမုံ့- ဟုမသိမ်းမယူဘဲ ပညာရှိ အမတ်ကြီး ၀ိဒူရကျော်ခေါင်နှင့် အမှုထမ်းလူနှစ်ထောင် (၂၀၀၀) ထပ်မံ ပေးအပ်တော်မူလိုက်သည်။
ယင်းသို့လျှင် ဒွါရာဝတီပြည်မှ အစဉ်အတိုင်း ချီလာခဲ့ ၍ တောင်ခွင်ကျွန်းအောက် ထန်းတပင်ဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်တော် မူလျှင် တပင်တိုင် တဲနန်း လေးဆောင်ဆောက်လုပ် စံနေတော်မူသည်။ ထိုအညာ မြစ်စဉ်တလျောက်ဖြစ်သော ပဌနဂိုရ်၊မကွေး ၊ ၀က်မစွတ်၊ ရေနံချောင်း၊စကု၊ စလင်း ၊ဘောင်လင်း၊ လယ်ကိုင်းမြို့ရွာသားတို့သည် ပျပ်ဝပ်ကြိုးနွံသဖြင့် လက်ဆောင် လက်နက် များကို လည်း လာ ရောက်ဆက်သကြကုန်သည်။
ထိုသူတို့အားလည်း ဘွဲ့၊အမည်၊ အရည်၊ရွှေ၊ ငွေ၊အ၀တ်၊ အစား၊ အစီး၊ အနင်း၊ အဆောင်၊ အ၇ွက်များ ကို ရည်သွား၇ှိသည် အလျောက် ချီးမြှောက် သူကောင်းပြုတော်မူသည်။ ညီတော် မင်းနောင်၊ မင်းနဂါးတို့ကို လည်း နန်းမြို့ တည်ရန် မြေခံကောင်းမြတ်ရာ ၊ သြဘာအတိတ်၊ နိမိတ်မင်္ဂလာ၊ မဟာဘူမိနက်သန်မှန်သော အကွက်အရပ် လျောက်ပတ် တင့်တယ်၊ နယ်ပယ် ချဉ်းနင်း၊ကြည့်ရှုရမည် အကြောင်း။ ၎င်းဒေသအရပ် ၊ကောင်းမြတ်သောအခွင့်၊ တော်သင့် တွေ့ရှိလျှင်... တန်ဆောင်း ပြအိုး၊ မြို့ရိုး၊ ကျုံး မြောင်း၊ ကောင်းမွန်ခိုင်လုံအောင် ၊တည်ထောင်ဆောက်လုပ်ကာ ရွှေပြည်တော်ကပါသော သရီရ မွေတော် ဓာတ်တော်များကိုဌာပနာကာ ၊ကြီးစွာသောစေတီ၊ တည်လုပ်စီရင်ပြီးလျှင် ပုံစံ အသေအချာများနှင့် နောင်တာ် သို့ လျှောက်ထားရမည်။ မှာထား အမိန့်တော်ရှိ ၍ ညီတော်မြတ်နှစ်ပါးတို့ ဗိုလ်နှစ်ထောင် (၂၀၀၀) ၊ ဆင်တစ်ရာ (၁၀၀) မြင်းငါးရာ (၅၀၀) များနှင့် ထွက်သွားရှာဖွေကြရာ ကျွဲနဖား အရပ်သို့ရောက်လေ၏။ ထိုအရပ်တွင် မြို့ရွာ တည် ခင်းချင်းနင်း ကြည့်ရှုလျှင် တောတောင်မကောင်း ၊ချောင်းမြောင်း ကမ်းပါး ကုန်းကျင်းများသည်ကို ၊ အားရနှစ် သက်တော် မမူသောကြောင့် ငါးရက်ဆိုင်းငံ့ စံနေတော်မူသည်။ ထိုအရပ်ကို တပ်တော်ရာ-ဟု သမုတ်ကာ ကျေး ရွာ တည်ထားပြုစုတော် မူသည်။
ထိုကချီလျှင်...တလိုင်းလူမျိူးတို့ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာများစွာ ဆက်သပြီးလျှင် တံဆိပ်လက်မှတ်မျာကိုယူ ၍ ကျွန်ခံကြ ကုန်သည်၊ ထိုအရပ်ကို တလိုင်းကျွန်ခံဟု သမုတ်တော်မူသည်၊ ယခု စကားရွေ့လျောကာ ဒလန့်ချွန်ဟု တွင်သည်။
ထိုအရပ်တွင်-တောင် ကမ်း ကြီးမား၊ သစ် ၀ါး ကြိမ်နွယ် ထူပေါသည်နှင့် ၊ထောက်လှမ်း ဆင်ခြင်တော်မူ သည်မှာ-
ဤအရပ်မှ ရှေ့သို့ ချီတက်လျှင် ယခု ချရပ်သောနေရာထက် သာလွန်၍ တောတောင်ကမ်းပါး ပေါ များကြီးမြင့်ရာသည်။ အမှုထမ်း ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်းနာဖျားရောဂါ များစွာ ဖြစ်အံ့သည်။ အနောက် မြောက်အရပ်သို့တက်ချီရမှ သင့်လျော်မည်ဟု တိုင်ပင် ညီညွတ်ကြသည် နှင့် ၊ ငါးရက် ဆိုင်းရပ်တော်မူသည်။
ယင်းကမှ ချီတက်လာရာ ဆတ်တစ်ခုသည် ၊ရေညွှန်များစွာ လူးလျက် သွားသည်ကို လိုက်လာ၍ စွဲရပ်နေထုင်သည်၊ ထိုအရပ်ကို ဆတ်သွား-တပ်ကြီး ဟုသမုတ်သည်။ ယခု စကားရွေ့လျော ၍ ဆတ်သွားကြီးဟု တွင်သည်။
ယင်းသောအခါ၊ ကြီးစွာသော မျောက်တစ်ခုသည်၊ သစ်ပင်မှ ဆင်းသက်လှာ ၍ မြောက်အရပ်သို့ ညျွှန်ပြသည်၊ ထိုလက်ညှိုး ညွှန်ပြသော အရပ်ကို ကြည့်ရှုရာ အခက်အရွက်တို့ဖြင့် စိမ်းညို နုပျိုသောတောကို မြင်သည်။ ထိုတောသို့ ရောက်အောင် ချီတော်မူပြီးမှ တပ်တော်ချရပ်နေ ထိုင်သည်။ ထိုအရပ်ကို တောစိမ်း တပ်-မင်းတဲ ဟုတွင်သည်။ ယခု ရွေ့လျော ၍ တောစိမ်း-ထန်းပင်တဲဟု တွင်သည်။
ပျူလူမျိုးတို့ ငါးလုပ် ၍နေသော အင်းကိုလည်းပျူအင်းဟု သမုတ်တော်မူ၍ ကျေးရွာတည် ထားပြုတော်မူသည်။
၎င်းက ချီလာရာ တစ်ခုသောရွာက သူအိုတစ်ယောက်သည် ’’ကောင်းကြွယ်ချမ်းသာ မြင့်မြတ်ပါစေသတည်း’’ ဟု ကောင်းချီး ထောပနာ လျက် ပိတောက်ပန်းများစွာ ဆက်သသည်။ ထိုအ၇ပ်ကို ပန်းတော်ဆက်ဟု သမုတ်သည်။ ယခုပန်းတောဟု တွင်သည်။
၎င်းကချီလာရာ ရှမ်းလူမျိုးတို့ အိုးဖုတ်လုပ်သော ရွာကို တွေ့ ၍ မည်သည့်ရွာ ခေါ်သနည်း-ဟုမေးရာ၊ ရှမ်းတို့ဘာသာ အိုးကို မောခေါ်သည်။ ထိုသို့သောအကြောင်းဖြင့် မောတောရွာဖြစ်ကြောင်း နှင့် လျှောက်ထားလျှင် ထိုရွာတွင်ဆိုင်းငံ့စံနေတော်မူ ၍ ဘုရားတစ်ဆူတည်တော်မူသည်၊ ထိုဘုရားကို ရွှေမောတောဟု သမုတ်တော်မူသည်။
ယင်းက ရပ်နားနေထိုင်ကာ မြေနေရေနေ အခြေအမြစ်ကောင်းသည်နှင့် ရတနာပြောင်မွန် ဆင်တော် ကို ရှေ့ညွှန် ထားလျက် မြို့ရွာချဉ်းနင်းစေရာ တာ (၃၀၀) ကျော်ခန့်ရှိလျှင် ရတနာပြောင်မွန်ဆင်တော်သည် မသွားဘဲ အရှည်လေးမြတ် ဝပ်၍နေလျှင် ဆင်ကဲမှူးမတ်တို့သည် ဆင်တော်မောပန်း စခန်းချ ရပ်ဝပ်နေကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသောကာလ ထိုအကြောင်း ကိုမေးတော်မူရာ အမတ်ကြီး ပဏ္ဍိစ္စ လျှောက်သည်ကား-
ဆင်တော်ဝပ်သောအကြောင်းမှာ ပန်းညောင်းကုန်ခန်း ညှိုးနွမ်းပြင်းပျ၍ ဝပ်ရသည်မဟုတ်ပါ။ ဆင်ကဲပြုလုပ်သူတို့မသိ၊ သတိချွတ်ယွင်း၍ လျှောက်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းသောတမူကား- မဟာသုဒဿစကြာမင်းသည် စကြာရတနာ ကိုရှေ့ညွှန်ထားပြီးလျှင် ကောင်းကင်ခရီး ဆင်ပျံစီးလျက် လေးကျွန်းလုံးကို လှည့်လည်တော်မူသည့်ကာလ၊ မြတ်စွာဘုရားတို့၏ မာရ်ငါးပါးကိုအောင်မြင်ရာဖြစ်သော ဝဇိရာသန၊ အပရာဇိတ၊ မဟာဗောဓိမြေသို့ရောက်လျှင် စကြာမင်းစီးသောဆင်တော်သည် ဦးကင်းကွဲအံ့ပသော ဝရဇိန်ချွန်းသွားဖြင့် ပေါက်လင့်ကစား မသွားမကျော်နိုင်ပါ။ ယခု ရတနာပြောင်မွန်ဆင်တော်သည်လည်း မကျော်မသွား တန့်နားဝပ်နေသောအရပ်သည် မြတ်စွာဘုရားတို့၏ သရီရဓာတ် မွေတော်မြတ်ဖြင့် ကိန်းဝပ်တော်မူရာ မဟာဘုမ္မိ သီရိသေဌ ဘူမဂ္ဂအစစ် ဖြစ်တန်ရာပါသည်ဟု လျှောက်ထားလျှင်-
အမတ်ကြီးလျှောက်ထားချက်စကားကို အားရဝမ်းမြောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ တောမြက်ခြုံ ပိတ်ပေါင်းများကို ခုတ်ထွင်ကြည့်ရှုရာ တစ်ခုသောအင်း၏အလယ် တစ်ပယ်ခန့်ရှိသောတောင်ငယ်တစ်ခုတွင် ရတနာဆယ်ပါးတို့ဖြင့် စီချယ် လျက် ဖောင်းရစ်အထက် သုံးတောင်ခန့်မျှပေါ်သော စေတီတော်မြတ်ကိုတွေ့ရှိသည်။ ထိုမှတပါး- အနီးအစပ် အရပ်ဒေသများတွင် အိုးခြမ်းကွဲ၊ ဖွဲဟောင်း၊ မီးသွေး၊ အုတ်ဆွေး၊ ပြာဟောင်း နွားခေါင်း နွားရိုးများစွာ တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းသို့ တွေ့ရှိရသောကြောင့် ထိုအရပ်တွင် မည်သည့်မင်း မည်သည့်ကာလ မြို့ပြတည်ထောင်နေထိုင်ဘူးသည်၊ မည်သူ တည်ထား ကိုးကွယ်သော စေတီတော်ဖြစ်မည် များကို အနီးအပါးကျေးရွာများရှိ သက်ကြီးသူအိုတို့အား မေးစစ်ရာ မည်သို့မျှ မပြောတတ်ပါ ။ တောအရပ်တွင် ယာခုတ်သောကာလ စာကမ္ဗည်း နှင့်၊ ကျောက်တိုင်တစ်ခု တွေ့မြင်ဖူးပါသည်ဟု လျှောက်ထားလျှင်-
၎င်းသူအိုတို့ လျှောက်ထားချက်အရ ကြည့်ရှုလိုက်ရှာစေရာ မြေပေါ် တစ်တောင်ခန့်ရှိသော ကျောက်တိုင်ကိုတွေ့၍ တူးဖော်ကြရာ တစ်ဆယ့်ငါးတောင်ရှိမှ ကျောက်တိုင်အဆုံးပေါ်သည်။ ၎င်းကျောက်တိုင်တွင် စာအက္ခရာသေချာအောင် မပါမရှိ ။ ကျောက်တိုင်အောက်ခြေထိပ်မှာသာ
က နှင့် ပ ဆင့်၍ တချက်
ဒ နှင့် ဆ ဆင့်၍တချက်
သြ နှင့် ပ ဆင့်၍ တချက် အက္ခရာ ခြောက်လုံးတွေ့ရှိ သည်။ ၎င်းအဆုံးတွင်လည်း… ဥဏှိ ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။ ထို့အပြင် စာကမ္ဗည်းမရှိ။ တွေ့ဟန်ကား.....
က္ပ ဒ္ဆ သြံ ဥဏှိ ဿ
ကဿပဘုရား ဥဏ္ဏလုံ မွေရှင်တော် ဤသို့လျှင်တည်း။
ထိုအကြောင်းကို မေးတော်မူရာ အမတ်ကြီး ပဏ္ဍိစ္စ္စ လျှောက်သည်ကား
ဥဏှဿ သဒ္ဒါ-သင်္ကျစ် ဟော ဖြစ်ပါသည်။ အက္ခရာခြောက်လုံးကို အဓိပ္ပါယတ္ထ ကောက်ယူ ရာမှာ- ကဿပ ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ထိုစေတီတော်သည် ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာထက်၌ ပွင့်လေကုန်ပြီးသော ဘုရားလေးဆူတွင် ကဿပမြတ်စွာဘုရား ၏ သင်္ကျစ်တော်ဓာတ်ကို ရှေးဘေးလောင်းတော် ဘိုးလောင်းတော်ဖြစ်သော ပြည်တည်မြို့တည် မင်းကောင်း မင်းမြတ်တို့ မပြတ်ကိုးကွယ်တည်ထားသော စေတီတော်မြတ်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်လျှောက်ထားလျှင် မင်းညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည် ၊ အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြည်ညိုတော်မူသည်ဖြစ်၍ ရွှေပေါက်ပေါက် ၊ငွေပေါက်ပေါက်၊ ပတ္တမြားပေါက်ပေါက်တို့ဖြင့် ပူဇော် ကန်တော့ခြင်း ။ ပါ သောမှူးမတ်၊ တပ်တော် အမှုထမ်းတို့သည်လည်း ချသော မျက်လွှာ ဦးက္ခောင်းရှိလျက်၊ လက်ယှက်၍ ရှိခိုးကာ များစွာ ပြုကြကုန်သတည်း။ ထိုအခါ ပါသော မှူးမတ်ကျေးကျွန်တို့ကို အလျင်တဆော သယ်ယူစေ၍ သုံးထောင် ခန့် ပေါ်ရှိသော စေတီတော်ကို လွှမ်းခြုံပြီးလျှင် အတောင်သုံးဆယ် (၃၀) မျှရှိသော စေတီတော်ကို တမုဟုတ်ခန့်နှင့် အပြီး တည်တော်မူ ၍ ရွှေပြည်တော်က ပါသော တနာဠိကဓာတ်တော်များကို ဌာပနာတော်မူသည်။
ထိုအရပ်ခြောက်ထောင်ခန့်မျှ လုံးပတ်ပြည့်ဖြိုးသောကိုယ်သဏ္ဍာန်ရှိသော လူကြီးလေးယောက်တို့ သည် လေးကျွန်းက သုဝဏ္ဏဘုမ္မိမြေကို ဘုရားသရွတ်လုပ်ရန် သွားရောက် သယ်ယူပေးအပ်ပါရစေ၊ ဆို ၍ ထိုသူလေးဦးတို့သယ်ယူ ပို့ရောက်သည်ကား
မြေသည်လည်း ဘောဂ၀တီပြည်၌ ရှိသော အရုဏ၀တီမြေနှင့် အလားတူ၏။ အရုဏ၀တီမြေ ဟူတုံသည် လည်း ရွှေအဆင်းနှင့် တူသလျှင်ကတည်း။
ထိုသူလေးဦးတို့ စေတီတော်အနီးအပါး သယ်ယူပုံထားသော မြေကို လေးကျွန်းမြေဟု ခေါ် ဝေါ်သည်။ အလိုတော် အတိုင်း ပြည့်စုံအောင် နတ်တို့ ကူညီမစသောကြောင့် ထိုမြေပုံထားသော ကုန်းကို ရွှေပြည့်စုံကုန်းဟူ၍ ခေါ်သည်။ ယခု စကားရွေ့လျော၍ ရွှေပြည့်စင်ကုန်းဟု တွင်သည်။
ထိုသို့ကူညီ၍ လေးကျွန်းမြေကို သယ်ယူပို့ဆောင်သော နတ်တို့သည် အခြားသူ လူစင်စစ်မဟုတ် ကဿပမြတ်စွာဘုရား၏ သင်္ကျစ်တော်ဓာတ်၊ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ သရီရဓာတ်တော်များကို ဌာပနာ၍ တည်ထားပြုလုပ်သော စေတီထူး စေတီမြတ်ဖြစ်သောကြောင့် စတုမဟာရာဇ် နတ်မင်းကြီ်း လေးပါး အမှန်ဖြစ်သတည်း ဟု ရွှေနှလုံးတော်မြတ် ရည်ရွယ်တော်မူပြီးလျှင် ကပ်ကမ္ဘာမြင့်ရှည် တည် စေခြင်းငှာ သပိတ်မှောက် အထက် ၊စေတီတော်လေးမျက်နှာတွင်--
၁။ အရှေ့ မျက်နှာ၌-ဓတရ ဋ္ဌ နတ်မင်းသဏ္ဍာန်၊
၂။ တောင်မျက်နှာ၌- ၀ိရူဠက နတ်မင်းသဏ္ဍာန်၊
၃။ အနောက်မျက်နှာ၌-၀ိရူပက္ခ နတ်မင်းသဏ္ဍာန်၊
၄။ မြောက်မျက်နှာ၌ -ကုဝေရ နတ်မင်းသဏ္ဍာန်၊
ဤနတ်မင်းကြီး လေးပါးတို့သည် မြေမှ ယူဇနာ(၄၂၀၀၀) လေးသောင်းနှစ်ထောင်မြင့်သော စတုမဟာရာဇ်နတ် တိုင်း၌ အသီးအသီး စောင့်ရှောက်နေထိုင်ဘိသကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန် မခြား၊ စေတီတော်မြတ်၏ ထက်ဝက်နှင့်ညီမျှသောအရပ်တွင် ထုလုပ် တည်ထားသည်။
မြို့တော်ပန္နက်တည်လုပ်ရာသော အခမ်းအနား ၊ဒေသရပ်ကွက်များကို စီမံခင်းကျင်းရမည်၊ အမိန့်တော်ရှိ၍ အမတ်ကြီး ပဏ္ဏိစ္စ စီမံခင်းကျင်းသည်ကား-
ရှေးရှေးသောမင်းတို့ တည်ထားရင်းနိမိတ်၊ အတိတ် ထင်မြင်အောင် ၊စီရင် ဆောင်ရွက် တော် မူကြသော ၊ ထုံးညီစံကျ အတိုင်း၊ ကျွဲနွားဆိတ် ၀က်တို့ကို အဓိဋ္ဌာန် ရည်ပြီးလျှင် အသီး အသီး ဘေးမဲ့လွှတ်ရာ စေတီတော်မြတ်ကို သုံးပတ်၊ လက်ျာရစ် လှည့်ပြီးလျှင် စေတီတော် မနီးမဝေးလွန်းသော အရပ်၌ တညီတညွတ်၊ တောင်သို့ တူရူ၊ မျက်နှာမူလျက်၊ ၀ပ်နေကြကုန်သည် ကို မြင်လျှင်..... စေတီတော်၏ ဤအရပ်တွင် နန်းမြို့တည်ရာ မင်္ဂလာအောင်ချက်၊ နက်သန်ဘူမိ၊ သီရိသေဋ္ဌ၊ဘူမဂ္ဂ ဖြစ်သည်။
သုဝဏ္ဏသာမဇာတ်၌ မိဂသမ္မတာ မြစ်ဆိပ်တွင်သုဝဏ္ဏသျှံမင်းအား ပီဠိယက္ခမင်း ပစ်ခွင်းသော မြားဒဏ်ရာဖြင့် သည်းထန်စွာ ပင်ပန်းခြင်းရှိသော အခါ အမှတ်မဲ့ လဲတော်မမူမီ၊ မယ်တော် ခမည်းတော်တို့ ရှိရာအရပ်ကို စဉ်းစား ဆင်ခြင်တော် မူပြီးမှ ၊ဦးခေါင်း လဲလျောင်းတော်မူပါသည်။ တကြောင်းလည်း မြတ်စွာဘုရားတို့၏ သဏ္ဍာန် ရွှေ -ငွေ-မြေ-အုတ် -ကျောက် သစ်သား အစရှိ သည်တို့ဖြင့် ထုလုပ် ကိုးကွယ်ကြသည်မှာ…
၁။အရှေ့သို့ ဦးခေါင်းတော်မူလျှင် -ရှင်ပင်သာလျောင်း။
၂။အနောက်သို့ မူလျှင်- ရှင်ပင်ပေါင်းလဲ၊
၃။တောင်သို့ မူလျှင်- နေရဗန်၊
၄။မြောက်သို့မူလျှင်-ပရိနိဗ္ဗာန်၊ ဟူ၍ လေးမျက်နှာလုံးပင် မင်္ဂလာ ဦးခေါင်းမူသင့်ကြောင်း စာဟောင်း စာတမ်း ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်သောကြောင့်- အသျှင်သခင်များသည်လည်း ဇာတိတော် ချက်ကြွေ၊ အောင်မြေ ပလ္လင် ၊ဗောဓိပင်ရောက်ရာ၊ အပ္ပရာဇိတ၊ ၀ဇီရာသန၊ မဟာမဇ္ဈိမ၊ဌာနအရင်းဖြစ်ပါသည် တ ကြောင်း။ ခမည်းတော်စစ်၊ မယ်တော်ချစ်တို့သည် လည်း အနောက်အရပ် ၊ တိုင်းပြည် ထီးနန်း၊ စံမြန်းစိုး မိုးတော်မူလျက်၊ ဖြစ်ပါသည်။ မိခင် ဘခင်တို့အား ရိုသေလေးမြတ် ၊လောကနတ်တစ်ဆူ ပြုသောသူတို့သည် မီးမှာပစ်လည်း မခြစ်ပါ၊ ရေမှာပစ်လည်း မနစ်ပါ။ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့ မိန့်ဆိုဟောင်းစကား၊ ထင်ရှားဖြစ်သည် နှင့်အညီ ၊ခမည်းတော်မြတ် ၊ မယ်တော်နတ်တို့ရှိရာ မဇ္ဈိမဒေသ၊ ပစ္ဆိမာအရပ် သို့ လျောက်ပတ်သော အထူး၊ မြို့ဦးသမုတ်၍ ပြုလုပ် တည်ထောင်ရလျှင် ၊နောင်အဓွန့်တည်၊ ဘုန်းတော် စည်၍ ၊ သက်ရှည် ရာကျော်၊ ရှိတော်မူမည် အကြောင်း၊ သားတော်အစဉ်၊ မြေးတော်အဆက်၊ မြစ်တော်အညွန့်၊ အဓွန့်ရှည် စွာ၊ သာသနာတော်ဖြန့်မိုး ၍ ၊ သူခိုးဒါးပြ၊ တန္တ မုဒိမ်း၊စစ်မက် ငြိမ်းလျက်၊ ခပ်သိမ်းပြည်သူ ၊ကြည်ဖြူ ချမ်း မြေ့ ရှိကြမည် အကြောင်း များနှင့် တင်လျှောက်လျှင် အားရနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ပုပ္ပါးစော၇ဟန်းဖြိုပြီးနောက် သက္က၇ာဇ် ၁၉၂ -ခု၊ ကဆုန်လဆန်း ၇ရက်၊ စနေနေ့၊ နေတစ်ချက်တီးအချိန်တွင်-
တောင်မြောက် အချင်းတာ ၃၀၊ အရှေ့အနောက်တာ ၅၀၊ အတွင်းမြို့တော်သမုတ်သည်။
မြောက်မျက်နှာ တာ ၃၅၀၊
အနောက်မျက်နှာအရပ်ကို မြို့ဦးသမုတ်၍ အတွင်းမြို့ ၊အပြင်မြို့၊ ကျုံး၊ ကန်များကို တစ်နေ့ ချင်းပြီးအောင် တည်တော်မူသည် ။ မြို့အုတ်ရိုးအထု လေးတောင်၊ အတွင်း ဆင်ခြေဖုံးမြေအထု သံတောင်(၂၀) နှစ်ဆယ်၊ အမြင့် (၈)တောင် ၊သက္ကရာဇ် ၁၉၂ခု၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၄ရက် တနင်းလာနေ့၊ နေ ၂ ချက်တီးကျော် ၊၃မောင်းခန့်အချိန်၊ နန်းတော်ရာ ရွှေပန္နက် သည်း ချရိုက်သည်။
ထိုအခါ ကဒူး လူမျိုးတစ်ယောက်သည် တင်းတိမ်ကို ခေါင်းမြီးခြုံပြီးလျှင် သေရည်ဗူးကို လွယ် လျက် ၊နွားနက်တစ်ခုကို စီး၍ နန်းတော်ရာ ရွှေပန္နက်အနီးသို့ရောက်လှာသောကြောင့်၊ တြင်းသံ န၀င်း သံစောင့်သူတို့က ဖမ်းဆီးရာ ထိုယောက်ျား သည် ကြောက်လန့်တကြား ဖြစ်သဖြင့် သေရည်ဗူးကို ပစ်ချလိုက်သည်ကာလ၊ ရွှေပန္နက်ပေါ်သို့ ကျသဖြင့် နန်းတော်ရာမြေကို အရက်ရည် ဖြန်းဘိသကဲ့သို့ သေရည်ဗူးကွဲလေ၏။
ထိုမှတပါးလည်း ရွှေပန္နက်သည်း ချစဉ်၊ တောင်အရပ်မှ ကြယ်တံခွန် ထွက်သည်။ ဥက္ကာကျသည် ၊ လုံးပတ် လေးထွာခန့် ပမာဏရှိသော မြွေစပါးကြီးတစ်ခု သည်၊ တမုဟုတ်ခြင်း ပေါ်လာ၍ ရွှေပန္နက်သည်းကိုပတ်ခွေပြီးလျှင် သျှူးလျှူးဟူသော အသံ ကို မြည်လျက်တောင်အရပ်သို့ ထွက်သွားလေသည်။
ဤသို့လျှင် အရပ်ရပ်ဖြစ်ထွန်းသော တိတ်၊ နိမိတ် တြင်းသံ န၀င်းသံများနှင့် မြို့၊ကျုံး ဘုရားများးကို တည်ထားပြီးစီးကြောင်း ၊ ပြည်မည် ၊မြို့မည်၊ ဘုရားမည်များကို ဘွဲ့နာမံတော် မခြည်ရသေးကြောင်း။ မြို့နေပုံစံ၊ သဏ္ဏာန်၊ တာကွာများ နှင့် နောင်တော် မင်းနှစ်ပါး ထံ အမတ်ကျော်ကို စေလွတ်တင်လျှောက်စေသည် ။နောင်တော် မင်းနှစ်ပါးလည်း ထင်ရှား အတိတ်၊ နိမိတ်ဖြစ်ဟန် အရေးများကို မေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ ၊ရခိုင်အမတ်ကြီး ၀ိဒူရ ကျော်ခေါင် လျှောက်သည်ကား….
အရှင်မင်းမြတ် - ညီတော်နှစ်ပါးတို့ကို အရေးပေးတော်မူ၍ တည်ထောင်စေသော အချက်တွင် နွားနက် စီးသော သူ၌ အရက်ဗူး ကွဲပျက်၍ ပန္နက်၏ အပေါ်သို့ကျရောက်သည်အလိုမှာ- တိုင်းတော် ပြည်တော်၌ နေကုန်သော သူ တို့သည် ရေစာပေါများ ၍ သောက်စား ယစ်ဝ ပျော်မြူးအံ့သော အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
တင်းတိမ်ကို ခြုံလျက်လာရောက်သည် အလိုမှာ တင်းတိမ်၏ သဘောသည် နေပူတံလျှပ်၊ မိုးစွတ်နှင်း ပက် ရှိသောအခါ၊ ကာသော် လည်းကောင်း ၊မိုးသော် လည်းကောင်း ၊ခြုံသော်လည်းကောင်း လုံခြုံခြင်းကို ရပါသည်။ ယင်းသို့သာလျှင်မဟုတ်သေး- တင်းတိမ်ဟူသော အမည်သညာ၊ အက္ခရာခေါ်ဝေါ်သော အလို့၊ပြည် တော်၌၊ နေသော သူတို့သည် လယ်ယာလုပ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ မင်းမှီစိုးကပ် ပြုခြင်း စသော ဥစ္စာ ရှာမှီးခြင်း အရပ်ရပ်တွင် သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေ ပေါများ ကြွယ်ဝ ၊ လောက်ငကုံတွင်အောင်၊ မရှာမမှီး၊ သာမည်စိုးစဉ်းရှိလျှင် တင်းတိမ် လွယ်ရာသောအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့သော နိမိတ်၊ အတိတ် လက္ခဏာ၊ မြတ်မွန်ရာသည်ကို အကြောင်းပြုသဖြင့်၊ ရွှေပြည်တော်ကို ရတနာတင်းတိမ်ဟု၊ သမုတ်တော်မူရလျှင်၊ နေပူတံလျှပ်၊ မိုးစွတ်နှင်းပက်နှင့်တူသော ရန်သူတပါးတို့ကိုနိုင်ရာ။ ကောင်းစွာ လုံခြုံအံ့သော အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေဘုံ ရွှေနန်း တည်တော်မူသော အရပ်ဒေသ ပုံစံတွင်လည်း-
အရှ့ကား- မင်းဝံ ရိုးမတောင်။
ဤသို့လျှင် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ကြီး ကဲ့သို့ ၊ညို့ညို့မှိုင်းမှိုင်း တံတိုင်းသဖွယ် တောင်ပတ်လည်ရစ်သွယ် လျက်၊ လယ်ပယ် ချိုင့်ဝှမ်း ၊ ပူချမ်းမျှတ ၊မိုးကျရေလာ။ ဆင်စာ မြင်းစာ ပေါများရာခပင်း၊ တွင်း၏သဏ္ဏာန်၊ ရှိလေ သည့် အဟန်ကြောင့် မြို့တော် ကို တောင်တွင်းကြီး ဟု သမုတ်တော်မူရလျှင် ပြည်သူချမ်းသာ၍ သာသနာစည် ပင်၊ လူရှင်ပျော်ပါး အစားအသောက် တောင်ကဲ့သို့မောက်အံ့သော၊ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေပန္နက်သည်းကို စပါးကြီး ပတ်ခွေသည်အလိုမှာ- စပါးကြီးမြွေတို့သဘောသည်၊ အခြားသောမြွေတို့ ကဲ့သို့ အစာအဟာရတို့ကို၊ လှည့်ပတ်သွားလာ၊ ရှာစားသောအလေ့မရှိပါ။ မိမိချက်ကြိုး ငြိလျှင် ၊အနီးအပါး၌ရှိ သော သမင် ဒရယ်၊ ယုန်ငယ်ကျွဲနွား အစရှိသောသတ္တ၀ါတို့သည် အခြားတပါးသို့ ထွက်သွားခြင်းငှာမစွမ်းနိုင်ပါ။ စွမ်းရောက် သရွေ့ပင် ပြေး သွားငြားသော်လည်း ၊ စပါးကြီးမြွေရှိရာ၊ အဖန်တလဲလဲ ရောက်လှာရဘိသကဲ့သို့ အစာအဟာရတို့ကို လှည့်ပတ်သွားလာ ရှာစားခြင်း အလေ့မရှိ။
ယခု တည်ထောင်တော်မူသော ရွှေပြည်တော် သည်လည်း အ၀တ်အစား စပါးဆန်ရေ ရွှေငွေ ဥစ္စာ၊ ရတနာတို့ဖြင့်၊ လွယ်လင့်တကူ ၊ ရှာယူပေါများခြင်း ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဆင်းရဲသား ကျွန်တော် မျိုးတို့ ကြက်ပျံမကျ ၊ပြည့်ဝ ချမ်းသာ၍ အိမ်ခြေလူနေအများ၊ တိုးပွားကြီးကျယ်ရန်ရှိပါသည်။ ဤပြည်မြို့မှ -အခြား သောတိုင်းပြည်မြို့များသို့ ထွက်သွား ပြောင်းရွှေ့ ရှိသော သူတို့သည်လည်း အရှည်လေးမြင့်၊ နွှဲဖင့်၍ မနေနိုင်ပါ။ စပါးကြီးမြွေချက်ကြိုးကို တိုးမိသော သတ္တ၀ါကဲ့သို့ ၊ ပြည်တော် တိုင်းတော်သို့သာ ၊ အလျင်တဆော ပြန်ရောက် နေထိုင်ရသောအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုစပါးကြီးမြွေ သျှူးသျှူး ဟူသောအသံကို မြည်လျက်၊ ထွက်သွားလေသည့်အလို့မှာ- သီဟိုဋ်ကျွန်း သားတို့ဘာသာ သျှူးသျှူးဟူသော စကားကို မဂဓရဇတိုင်းသားတို့ဘာသာ သုသုဟူသော အက္ခရာကိုရပါသည်။ ထိုသုသု ဟူသော စကား ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုလျှင် ကောင်း၏၊ ကောင်း၏ ဟုဆိုသော ကောင်းချီးပေး ခြင်းအနက်ကို ရသည် ဖြစ်သောကြောင့် တိုင်းပြည် ထီးနန်း ၊ တည်ထောင်သည်ကို သမာဒေ၀စသော နတ်ကာင်း နတ်မြတ် တို့ ကောင်းချီး ပေး ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုစပါးကြီးမြွေ တောင်အရပ်သို့ ထွက်သွားသည် အလိုမှာ- ဒက္ခဏ ဒိသာ တောင်မျက်နှာကို အယူ တော် မရှိသင့်  ။ မြေကြီး မောက်မိုသောတောင် ကို ယူရပါမည်။ မြန်မာဘာသာ တောင်ကို ရှန်းကဒူး လူမျိုးတို့ ဘာသာ၊ လွယ် ဟူ၍ခေါ်ပါသည်။ တိုင်းတော်ပြည်တော်ကို ရန်သူတပါး၊င့်ယှက်ငြားသော်လည်း၊ လွယ်လင့် တကူ၊ အောင်မြင်တော်မူအံ့သော အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့လျှင်အရပ်ရပ်သို့ ကျန်းဂန်၊ ထုံးစံပဝေဏီနည်း မှီစံကျ၊ စကားများနှင့် လျှောက်ထားလျှင်၊ အလွန်အား ရ နှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍-
` သမုတ်၍၊ ကမ္ဗည်းမော်ကွန်းတိုင် စိုက်မှတ်ရမည်အကြောင်းများနှင့် ညီတော်နှစ်ပါးထံ မိန့်တော်ပြန်ဆို သည်။ ထိုမှတပါး အမတ်ကြီး ၀ိဒူရ ကျော်ခေါင် ထပ်မံလျှောက်ဆိုပြန်သည်ကား…. ဘုန်းတော် အလွန်ကြီးလှ သော အရှင်မင်းမြတ်၊ - သုံးလူ့အထွဋ်၊ သဗ္ဗညု မြတ်စွာဘုရားသည်၊ ၁၆၀ါမြောက်၊ အာဠ၀ီဘီလူးကို ထူးမြတ်သောတရားဖြင့် ဟောကြားဆုံးမတော်မူ စဉ်- ဘီလူးစာ ပို့ရောက်သော အာဠာဝကရွာစားမင်း၏သားကို ဘုရားမြတ်စွာ တောင်းယူ၍အတူ နောက်ပါခေါ် ပြီးလျှင်၊ လွန်လေပြီးသောဘ၀၊ ခိုမင်းအစစ် ဖြစ်တော်မူဘူးသော၊ ခိုတောင်သို့ ဝေဏေယျသတ္တ၀ါကို ဒေသနာ ရေအေး ၊ တိုက်ကျွေးတော် မူမည်၊ ဒေသစာရီ၊ ကြွချီဆိုက်ရောက်သည့် ကာလ၊ မျောက်ညီနောင် လေး ခုတို့သည်၊ သဒ္ဒါတရား လွန်ကြီးမား၍၊ ဘုရားမြတ်စွာ ကို ၊ သရက်သီးလေးလုံး ကပ်လှူကြပြီးလျှင်၊ ထိုသရက်စေ့ ကိုလည်း ၊ မြေတွင် တပေါင်းတည်း မြှပ်နှံလေသည် ။
ထိုအကြောင်းကို ဘုရားရွှေဥာဏ်တော်ဖြင့် မြင်တော်မူ၍ ဤသရက်သီး လေးလုံး ကပ်လှူသော မျောက်ညီလေးခု တို့သည် နောင်လာလတ္တံ့သောအဓွန့်ကာလ၌ ဤခိုတောင်မှ၊ အရှေ့တူရူအရပ်တွင် မင်းမြတ် ညီနောင် လေးဦးဖြစ်၍ တိုင်းပြည်ထီးနန်းတည်ထောင်ပြုစုမည်။ သရက်လေးစေ့ကို တပေါင်းတည်း မြှပ်နှံသောအ လိုမှာ- ထိုပြည်မှ ဆင်းသက်လှာသော ချောင်းမြောင်းတို့သည် တပေါင်းတည်းတစည်းတည်း ဖြစ်၍ ဤခိုတောင်ကို ထွင်းဖောက် ပြီးလျှင် ဧရာဝတီမြစ်သို့ပတ်ရစ် ဆင်းသွားအံ့သော အကြောင်း ဖြစ်သည်။
လေးခုသော သရက်စေ့လည်း တပေါင်းတည်းသော သရက်လေးပင် အထင်အ၇ှား ပေါက်၍ မျောက်အ ပေါင်းအား စားသောက် မှီခိုစရာများစွာ ဖြစ်အံ့သည်ဟု ဗျာဒိတ်တော်စကား မိန့်ကြားတော်မူဘူးသည်နှင့် အညီ ထို သို့သော ချောင်းငယ် မြောင်းငယ် တို့မှ စီးသော ရေသည်၊ တရော တယှက်တည်းပေါင်း၍ ခိုတောင်ဟူသော တောင်ကို ထွင်းဖောက်၍သွားကြောင်း။ တရောတယှက်တည်းသော သရက်ကြီးလေးပင်တို့သည် အထင်အရှား ပေါက်ရောက်ရှိသည် အလိုကို ထောက်သော် ဗျာဒိတ်စကား မိန့်ကြားတော်မူသော မျောက်ညီလေးဦးတို့သည် အသျှင်မင်းမြတ်တို့ပင် ဖြစ် တော့သည် ။" ဟု လျှောက်ထားလျှင်- မိဖုရား နုမလ္လာကို ခေါ်တော်မူ၍ အမိန့်တော်ရှိသည်ကား ခမည်းတော်ဒွါရာဝတီမင်းက ထည့်အပ်တော်မူလိုက်သော ဤ အမတ်ကြီး ၀ိဒူရကျော်ခေါင် သည် မင်းရေး မင်းရာ၌သာ လိမ္မာ ပြွမ်းတီးသူမဟုတ် လောကုတ္တရာ တရား၌လည်း ငါ့အား ညွှန်ပြ၊ အတိတ်က စကားကို လည်း မှတ်သားလောက်အောင်၊ တဘောင် သိုက်ထွက်နှင့် စဉ်ဆက် ဟောပြောနိုင်သူ ဖြစ်ပေသည်ဟု အမှတ်ထား၍ ကြီးကျယ်သော နေရာထူးကို ပေးသနား တော်မူသည်။ ဒွါရာဝတီ စံနေရာအရပ်ကိုလည်း ဦးသုံးကြိမ်ချ၍ ကန်တော့ပြီးလျှင် မိဖု၇ား နုမလ္လာကို ရွှေချိန် ပိဿာ တစ်ရာကောင်းချီးပေးတော်မူသည်။
ထိုကချီလာရာ သားတိုးသမားဖြစ်သော မုဆိုးတို့ အမဲဟင်းလျာ ဆက်၍ ရဲဘက်တော်အများ စားသုံးရုံ မက ၊လောက်င ပိုမိုရှိသောကြောင့် အသီးအသီး တန်းကြီးတန်းငယ်တို့နှင့် အံ့သြဘွယ်လှန်းထားကြသည်ကို မြင်လျှင် ကြည်ရွှင်နှစ်သက်တော် မူသော စခန်းဖြစ်၍ သားတိုးတန်းသမုတ်တော်မူပြီးလျှင် အမတ်ငစံလှကို ကျေးရွာပြုစု တည်ထားပေးအပ်တော် မူခဲ့သည်။
ထိုကချီလာရာ မင်္ဂလာတဲနန်းတစ်ဆောင်သို့ရောက်တော်မူပြန်လျှင် သဘင်ကြီးစွာခံ၍ သုံးရက်စံနေတော် မူသည်၊ ထိုအရပ်တွင် ကြည်လင်နှစ်သက် မခွါရက်အောင်၊ သုံးရက်လုံးလုံး စံနေသော ကုန်းဖြစ်၍ ညီနောင် ကုန်းဟု သမုတ်တော်မူသည်။
ထိုအရပ်က ကြည့်မျှော်တော်မူလျှင် စိမ်းညိုသာယာ၊ ရေလာ ရေဆင်း ၀ိုက်ကွင်းနယ်ပယ်၊ အံ့ဘွယ် ထူးဆန်း တောပန်း တောင်ပန်း ၊ ပြိုးတပြွမ်း ရှိသည်ကို မြင်တော်မူ၍ ‘’ညီတော်တို့ တည်သော တိုင်းပြည်သည်၊ ဤ အရပ် ထက်ပင် သာလွန်သလော‘’ ဟုပြောဆိုယောင်ယမ်းရှိသောအရပ်ကို မင်းကြည့်ယောင် သမုတ်၍ အမတ် ကျော် ကို ကျေးရွာ တည်ထားပေးအပ်တော် မူခဲ့သည်။
ဤသို့လျှင် ညီနောင်နှစ်ပါးတို့၊ ထိုအရပ်က ချီလာရာ ညီတော်အငယ်ဖြစ်သော မင်းနောင် မင်းနဂါးတို့သည် လက်ဆောင် ပဏ္ဍာ အများနှင့် နောင်တော် မင်းနှစ်ပါးကို ဆီး၍ကြိုတော်မူကြသည်။ ထိုကြိုသောအရပ်တွင် ဇရပ် ကြီးမားစွာ ဆောက်လုပ် ထားသည်။ ထိုဇရပ်ကို ဆီးကြိုစရပ် ဟု သမုတ်တော်မူသည်။ စကားရွေ့လျော၍ ကဏ္ဏဇ ဒုတိယ အက္ခရာ ‘’ခ’’ကို ‘’ယ’’ပင့်၍ ဆီးချို ဟုရေးမှတ် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ယင်းကချီလာ၍ ရွှေမြို့တော်သို့ ဆိုက်ရောက်သော ကာလ လက်ျာရစ်လည့်၍ ကြည့်ရှုတော်မူပြီး လျှင် မြောက်တံခါးက ၀င်တော်မူရာ ရွှေနီအချိန် ငါးပိဿနှင့် ရွှေအိုးတစ်လုံး ရတော်မူသည် ယင်းသည့်တံခါး ကို ရွှေအိုးရတံခါး ဟုသမုတ်တော်မူသည်။ ယင်းကမှ စေတီတော်မြတ်ကို အဖူးအမြော်ပူဇော်ကန်တော့ ၀င်တော်မူပြီးလျှင် ရွှေနန်းတော်သို့ ဆိုက် ရောက်တော်မူသောကာလ၊ ညီတော်နှစ်ပါးကို အားရနှစ်သက်တော်မူလှသောကြောင့် ဘွဲ့အမည်၊ အခမ်းအနား အစီးအနင်း၊ စားကျေးမြို့ရွာများကို အထူးသဖြင့် ကြီးကျယ်စွာ ပေးသနားတော်မူသည်။ အမတ်ကြီးပဏ္ဏိစ္စ၊ ၀ိဒူရ ကျော်ခေါင်ကိုလည်း -မဟာဝိဒူရကျော်ခေါင် အသီးအသီးမှူးမတ် ကျေးကျွန်များကိုလည်း ရည်သွားရှိသည်အ လျောက် ချီးမြောက်သူကောင်းပြုတော်မူသည်။
ထိုမှတပါးလည်း စေတီတော်ကို ဘွဲ့နာမည်ချည်ရန် အမိန့်တော်ရှိ၍ အမတ်ကြီးနှစ်ဦးတို့ညှိနှိုင်း တိုင် ပင် စီရင် ပြုလုပ်ကြသည် ကား..... .. ယခု တည်ထားတော်မူသော စေတီသည် အင်း၏ အလယ် တောင်ငယ်တစ် ခုပေါ်တွင် တည်တော်မူသည်တရပ် … ထိုစေတီတော်မြောက် မနီးမဝေးလွန်းသော အရပ်တွင် ထင်ရှားသော အင်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ထိုအင်း၏ တောင်တည့်မတ်ရာတွင် တည်ထားတော်မူသော စေတီဖြစ်သည်တရပ်၊ စေတီတော်မြတ်ကို တွေ့ရှိရင်း ဌာန သည်လည်း ရွှေကြာအင်း၏ အလယ် တောင်ငယ်တစ်ခုအပေါ် တွင် အကျော်အစော လတ်တလော တွေ့ရှိ တည်ထားတော်မူသည် တရပ်၊ ဤသို့သော အကြောင်းနှစ်ရပ်၊ တ ပေါင်းတည်း ထပ်မိကြသည် ဖြစ်၍ " ရွှေအင်းတောင် မြတ်စွာဘုရား" ဟု သမုတ်တော်မူသည်။
ထိုမှတပါးလည်း ညချမ်းသောအခါ မင်း၊ မှူးမတ်ပရိသတ်တို့ အရပ်ရပ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် များကို တိုင်ပင်စည်းဝေး ရှိနေစဉ်၊ ဓာတ်တော်များကို ဌာပနာတိုက် မသွင်းမီ ဆင်တော်က ယူဆောင် ၍ တန်ဆောင်းပြသာဒ်ထွင် ထား သောအရပ်၌ ဓာတ်တော် ၇ ဆူသည် ရောင်ခြည်တော် ၆ ပါးတို့ တွင် ပြိုးပြိုးပြက်သော အရောင်တော်ကို ထင်ရှားစေလျက် တက်တုံ သက်တုံ ရှိသည်ကို ဖူးမြော်ကြရ သဖြင့် အဓိဌာန်ပြုလုပ် ပင့်ယူပြီးလျှင် ထိုဒေသအရပ်တွင် စည်းခုံတစ်ဆူ တည်တော်မူ၍ ဌာပနာရ သည်။ ယင်းစည်းခုံတော်သည်၊ နန်းမြို့အတွင်း ကျရောက်သည် ဖြစ်၍ အတွင်းစည်းခုံတော်ဟု က မ္ဗည်းမော်ကွန်း စိုက်မှတ် သမုတ်တော်မူသည်။
၃။၎င်းအရှေ့တံခါးကို-အသည်တံခါး၊ ဟူ၍အသီး အသီး မော်ကွန်း ကမ္ဗည်းစိုက်မှတ်တော်မူသည်။
၎င်းနေ့ မိဖုရားကြီးနုမလ္လာနှင့် မုဒ္ဓါဘိသေက ဘိသိက်ကို ခံတော်မူ၍ ရေသဘင်ကစားလောက် အောင် မြို့အရှေ့မြောက်တွင် ကြီးကျယ်လှသော ကန်တော်ကိုတူးလုပ် တက်ဆည်တော်မူသည်၊ ထိုကန်တော်အတါင်း ဥတိန္နနတ်စင်ကိုလည်း တပင်တိုင် လည်ပေါ်ဆောက်၍ တင်ကြား ပသတော်မူသည်။
မြို့အရှေ့ မြောက်မျက်နှာတွင် ဆင်ကျုံးကို အုဌ်နရပတေ အသေအချာများနှင့် တူးလုပ်တော်မူ သည်။
ညီတော်မင်းနောင်ကိုလည်း အိမ်ရှေ့မင်းတို့ အစီး အနင်း အဆောင်အရွက်များနှင့် နန်းတော် အနောက်မြောက်ဖျားတွင် အိမ်တော်ဆောက်လုပ်ပေးအပ်တော်မူသည်။
မြို့အရှေ့-ကျွဲဖြူကန်၊ အင်ပင်ကန်၊ ကန်လှ။
မြို့တောင်-အရိုင်ကန်၊ အင်ကြင်းတိုင်ကန်၊ ကြာခတ်ကန်။
မြို့မြောက်-ခင်တဲကန်၊ ဥာဏ်ကန်၊ ကြာနီကန်။
မြို့အရှေ့တောင်-ကုလားကန်။ သည်ကန်များကိုလည်း ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်တို့မှီတင်းလောက်အောင် ဆည်ဖို့ လုပ်ဆောင်တော်မူသည်။ ယင်းသို့သော အကြောင်းဖြင့် ထိုမင်းညီနောင်လေးပါးကို ကန်တူး ညီနောင်ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
၁-လုင်မြို့-နေလုင်အမတ်ကို မြို့မြောက်၊ ငါးတိုင်ကွာအရပ်တွင် ခံမြို့တည်လုပ်စေ၍ ဗိုလ်၅၀၀ နှင့်နေ ထိုင်စေသည်။ ထိုမြို့ကို လုင်မြို့ဟု သမုတ်တော်မူသည်။
၂-စစ်တားမြို့- မြို့တောင်ခရီးငါးတိုင်ကွာတွင် အမတ်ငမည်းထွေးကို ခံမြို့တည်လုပ်စေ၍ ဗိုလ် ၅၀၀ နှင့်နေထိုင်စေသည်၊ ထိုမြို့ကို စစ်တားမြို့ဟု သမုတ်တော်မူသည်။
၃-ငမင်မြို့- မြို့အရှေ့ ငါးတိုင်ကွာတွင် အမတ် ငသော်တာကို ဗိုလ် ၅၀၀ နှင့် ခံမြို့တည်ထားနေထိုင်စေ သည်။ ထိုမြို့ကို ရွှေသမင်မြို့ဟု သမုတ်တော်မူသည်။
၄-ဒုဋ္ဌပုရမြို့-မြို့အနောက် ငါးတိုင်ကွာတွင် ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းကို ဒုဋ္ဌပုရမြို့ သမုတ်၍ အမတ် ငဝေကို ဗိုလ် ၅၀၀ နှင့် နေထိုင်စေသည်။
၅-နတ်မောက်မြို့- နတ်မောက်မြို့မှာ ဘထွေးတော်နန္ဒကျော်ထင်ကို အစားကံကျွေးခံ ပေးသနားတော် မူသည်။
၆-ပဌနဂိုရ်မြို့- ပဌနဂိုရ်မြို့မှာ အမတ် ငစောကို အစားကံ ကျွေးခံ ပေးသနားတော်မူသည်။
၇- တောင်ခွင်မြို့ -တောင်ခွင်မြို့မှာ ညီတော်မင်းနောင်ကို အစားကံကျွေးခံ ပေးသနားတော်မူသည်။
တရံရောအခါ ရွှေအင်းတောင် မြတ်စွာဘုရားမှ ရောင်ခြည်တော်တို့သည် လျှပ်စစ်နွယ်ကဲ့သို့ သော အရောင် ကို ထင်စေလျက် ဒေသစာရီ ကြွတော်မူခြင်း၊ အနောက်မြောက် အရပ်မှ ရောင်ခြည် တော် တို့ သည် ရွှေအင်းတောင်မြတ်စွာဘုရား သို့ဒေသစာရီ ကြွရောက် ကိန်းဝပ်တော်မူခြင်း။
ဤသို့လျှင် အထူးတဆန်း၊ အံ့မခန်းမျှ ကူးသန်းများပြားခြင်း ရှိသည်ကို မှူးမတ်အပေါင်း ခြံရံ လျက် မင်းကြီးမင်းပြောင် ထွက်တော်မူ၍ ကြည့်ရှုရှာဖွေရာ ဗဿနိုးမြို့အရှေ့တွင် ဥာဏ်တော်အ တောင် ၂၀ ခန့် မျှ ပေါ် ရှိသော စေတီတော် တစ်ဆူ တွေ့ ရှိသည်ကို ခြုံမြက်ပိတ်ပေါင်း သုဓ်သင်စေပြီး လျှင် ရွှေပေါက်ပေါက်၊ ငွေပေါက်ပေါက်၊ ပတ္တမြားပေါက်ပေါက်တို့ဖြင့် ပူဇော်ကန်တော့စဉ် ဓာတ်တော် မွေတော်အပေါင်းသည် ပြိုးပြိုးပြက် တခဲနက်သော အရောင်ကို ထွန်းလင်းစေလျက် တက်တုံ သက်တုံ မီးကျီးပုံကဲ့သို့ အစုံသော ပြာဋိဟာကို ဗိုလ်ပါ မှူးမတ်နှင့်တကွ ဖူးမြင်ကြရလျှင် အလွန်နှစ်သက် ကြည်ညိုဘွယ် ရှိလှသောကြောင့် မင်းကြီးနှင့် မိဖုရားမှူးမတ်တို့သည် အုဌ် န၇ပတေများကို ကိုယ်စီဝေငှ တာခံကြပြီးလျှင် သုဘောဂစေတီတော်ကဲ့သို့ ထပ်မံတည်ထား ကိုးကွယ်တော်မူသည်။
အနီးအပါး ၇ှာဖွေကြရာလည်း ကျောက်စာမော်ကွန်းတွေ့ရှိသည်။ ကျောက်စာကား-
"မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူတော်မူပြီးနောက် သာသနာသက္ကရာင် ၁၀၁ ခုတွင်၊ မဟာ သမ္ဘ၀ဘီလူးမရင်နှစ်၊ သမီးချစ် လှ ကလျာ ၊ မိဖုရား မယ်ပန်ထွာသည်၊ ၀ဇိရာဝုဓ် ၊ရာဇု တ္တမ၊၀တိံသဦးကိုင်၊ ကသစ်ပိုင်က၊ သုံးဆိုင်လုံနတ်၊ မွေတော်ဓာတ်တော်ကို၊ ကပ်က မ္ဘာမြင့်ရှည်၊ ထွန်းလင်းတည်အောင်၊ သာကြည်ပေးမ၊ ကိုယ်တော်တိုင် ညွှန်ပြသော၊ ဘုရားအလောင်း၊ ကြက်ဖြူကောင်းပျော်ရာ၊ စေတီတော်ဌာပနာ၍၊ ရတနာဆယ်ပါး၊ မွမ်းမံထားသည် ဘုရား……ရွှေရောင်တော်။ "
ဟုကျောက်စာ ကမ္ဗည်းတွေ့ရှိသည်။ ယင်းသောအခါ မင်းမှူးမတ်တို့သည် သဒ္ဒါတရား ပွားများဆကဲ၊ မရောင့်ရဲနိုင်သည် ဖြစ်၍ ၁၅ ရက်ပတ်လုံး၊ ပွဲလမ်းကျင်းပ၊ လှူဒါန်းပူဇော် ကြပြီးမှ နေပြည်တော် တောင်တွင်းကြီးမြို့သို့ ပြန်လည်တော်မူသည်။
တရံရောအခါ၊ မဟာနုမလ္လာ ရတနာဒေ၀ီအမည်ရှိသော မိဖုရားခေါင်ကြီးသည်၊ မင်္ဂလာမြို့ဦး မြို့ထိပ်တွင် ဓည၀တီပါ အမှုထမ်းတို့နှင့်၊ ရွှင်လန်းကြည်ဖြူ ကူညီလုပ်ဆောင်စေပြီးလျှင်၊ ကိုယ်စား တော်စား၊ ရုပ်ပွားစေတီတော်တစ်ဆူ၊ တည်ထား ကိုးကွယ်ရပါမည် အကြောင်းနှင့် တင်လျှောက်လျှင်..
ငွေစင်ပိဿာ (၁၀၀၀)၊ ထုတ်ပေးသနားတော်မူ၍ ဓည၀တီနိုင်ငံတော် ပါရင်းဖြစ်သော အမှု ထမ်းလူ(၁၀၀၀)တို့ကို အ၀တ်အစား၊ စပါးဆန်ရေ၊ ရွှေ ငွေ ဟူသမျှ မတောင့်မတ၊ မကြောင့်မကြ ရအောင် ဝေငှ ပေးကမ်း၊ အားရ နှစ်သက် မတွက်မချက် မငဲ့ကွက်ဘဲ အလက္ကဒူပ၊ ၀ိဒူရအမတ်ကို ကြီး ကြပ် လုပ်ဆောင်စေရာ….
ဘိနပ်ဝန်း သံတေင်(၅၀၀) ငါးရာ ဥာဏ်တော်အမြင် သံတောင်(၁၃၆) တစ်ရာသုံးဆယ့်ခြောက်တောင်ရှိသော စည်းခုံတော်ကို တစ်လ ခြင်းနှင့် ပြီးစီး တည်လုပ်တော်မူသည်။ ဌာပနာတိုက်မှာ ပြည့်ရှင်မင်း ကိုယ်လေးရွှေ မိဖု၇ားကြီး ကိုယ်လေးရွှေများကို ပဌမ မဟာဗောဓိမှစ၍ ရာဇာယတန လင်းလွန်းပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံးတော်မူ သော အဟန် သဏ္ဏာန်ပြီသအောင် ရုပ်ရှင်တော် သွန်းလုပ်၍
ပထမ ပစ္စယာ-ခြင်္သေ့ရုပ် (၁၀၀)
ဒုတိယ ပစ္စယာ-ပန်းသွတ် ညောင်ရေအိုး(၁၀၀)
တတိယ ပစ္စယာ-စေတီတော် (၇၀)
မုခ်ထောက်လှေကား နရား မကာရ်း၊ လက်ယမ်း နတ်ပွေ့ ၊ခြင်္သေ့ကွန့်မြူး၊ ဘီလူးဂုမ္ဘဏ်၊ဂဠုံပျံ နဂါး လှည့် ၊ ရှုကြည့်ငဲ့စောင်း၊ ယူဇနာ(၁၀၀၀၀)တစ်သောင်း၇ှိသော အယုဇ္ဇပုရ၊ ပဗ္ဗတုတ္ထ ရွှေတောင်ကြီး ကျသကဲ့သို့ ၊လှပတင်းတယ် ၊ချယ်လှယ်မွမ်းမံ၊ အရံစောင်းတန်းများနှင့် တည်လုပ်တော်မူသည်။
ထီးတော်အ၀န်း ၃၆ တောင် အ၇ပ် သံတောင် ၂၂ တောင်ကို ခမည်းတော် မယ်တော်တို့က သုံးစားရန် ပေးသနားတော် မူလိုက်သော ရွှေချိန်ပိဿာ ၅၀ ကို သံပြားတွင်ရွှေပါးကပ်၍ တင်လှူတော်မူသည်။
ယင်းသို့လျှင် စည်းခုံတော်ကြီး အပြီး မြောက်သည် ဖြစ်၍ ‘’တန်တော့’’ဟု ဆင့်ဆိုပြီးနောက်မှ လာရောက်တိုက်ပို့သော အုဌ် ကို အပိုမဖြစ်စေ၇၊ အုဌ် ချ၇င်း နေရာတွင် စေတီတော်တစ်ဆူ ထပ်မံ တည်လုပ်ပြန်သည်။ ထိုစေတီကို "တန်တော့ရှင်ပင် " ဟု သမုတ်တော်မူသည်။
၎င်းစည်းခုံတော်အနီး ရဟန်းသံဃာတော်တို့ ဥပုသ်ပ၀ါရဏာ ကံကြီး ကံငယ် ဆောင်ရွက်ရန် သုံးထပ်လည်ပေါ်သိမ် ကို သမုတ်၍ ရွှေအပြည့်ထည့်တော်မူသည်။ ခြေတော်ရာ တစ်ဆူလည်း ထုလုပ်ကိုးကွယ်တော်မူသည်။ စည်းခုံတော်ကြီး ကို အောင်မြင်ဇေယျ ဟု ကမ္ဗည်းမော်ကွန်း စိုက်မှတ်တော်မူသည်။ ၎င်းဘုရားကို ရခိုင်သားတို့ အားထုတ် လုပ်ဆောင်သော ဘုရားဖြစ်၍ ရခိုင်ဘုရားကြီး ဟူ၍ လည်းခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ထိုမှတပါး တိုင်းပြည် နိုင်ငံ၌ရှိသော ၇ှမ်း၊ကဒူ၊ကချင်၊ က၇င် ၊ပြူ ၊ချင်းတို့ မှုခင်းရှိလျှင် ယုတ် မြတ်လေး ပေါ့ကိုမသိ ဆိုမိ ဆိုရာ ဘာသာဓလေ့ ၊ကြုံတွေ့သမျှ ထုံးတမ်းနှင့် နတ်ပန်း ချိုးခြင်း၊ သေ အိုးခွဲခြင်း၊ နွား ကျွဲတို့ ဥက္ခောင်း ကို တောင်းလောင်းဖြတ်ခြင်း စသော အကြောင်းမျိုးတို့သည် ၊ အကျိုးမရှိ ၊မသိသော အမူအ၇ာ ဖြစ်၍ အကုသလ၊ အဓမ္မ အမှုတို့ကို နိုင်နင်းအောင်မြင်တော်မူပြီးလျှင်၊ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၊ ကျူးကျော်ပုတ်ခတ်ရှိက သေဒဏ်-လျော်ဒဏ်၊ တရားခံ စ၇ိတ်ပေး၊ငွေယူ -ဖြောင့်ကွယ်သူတို့မှာလည်း ပစ္စည်းဂုဏ်အင်၊ အ၀င်အကျန်၊ လိုရန် ပိုကျူး၊ရှိသည်များကို အရင်းဖြစ် သင့် ၊ အပွားဖြစ်သင့်၊ ၂ ဆင့်ပေးထိုက်၊ လတိုးလိုက်စသည်ဖြင့် စီရင်ရန် ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိတို့ နှင့် ၊ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍၊ ဓမ္မသတ် ကျမ်း ပြုစုတော်မူသည်။ ထိုကျမ်းကို တောင်တွင်းဓမ္မသတ် ဟု ယခုတိုင် ထင်ရှားသုံးစွဲလေ့ ပြုကြကုန်သည်။
တရံရောအခါ တောင်တွင်းကြီးမြို့ အနောက်တွင် ဘုရား တည်လုပ်ခြင်းသည် ရခိုင်ပြည် ပျက် စီးအောင်နံနှိမ့်၍ တည်သော ယတြာဘုရားဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်မင်းအား ကုန်းစကားဖြင့် ချောစားပြုလုပ် ကြသောကြော့င်၊ ၎င်းဘုရားကို ဖြိုဖျက်စေရန်၊ အမတ် ငရွှေရကို၊ ရခိုင်မှုထမ်းလူ(၁၀၀၀၀)တစ်သောင်း နှင့် စေလွှတ်လိုက်ရာ တောင်တွင်းကြီးမြို့အနောက်၊ ခရီး ၈ တိုင်ကွာခန့်တွင် ကြီးစွာသော စစ်တလင်း ကြီး ခင်းကျင်းနေထိုင်ရန်တောခြုံခုတ်ထွင် သုတ်သင်ရှင်းလင်း၍ မှီတင်းစွဲရပ်နေထိုင်သည်။ ထိုအရပ်ကို ယခု စစ်တလင်း ဟုတွင်သည်။
ရခိုင်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ရန် စိုင်းပြင်းခြင်း
ယင်းသို့လျှင် ရခိုင်အမတ်ဖြစ်သော စစ်ကဲ-ငရွှေရ စစ်သည်(၁၀၀၀၀)တစ်သောင်းနှင့် ချီလှာ ဆိုက်ရောက်ကြောင်း မင်းကြီး မင်းပြောင် ကြားသိတော်မူလျှင်၊ နဂါးမျက်စောင်းကဲ့သို့၊ တဘက်သားဝံ့ ခြင်းငှာ မထိုက်သော ၊ကြီးစွာသော အမျက် ထွက်တော်မူ၍ အလျင်တဆော တိုက်ခိုက်သိမ်းယူတော်မူ မည် ရှိသည်တွင်. အမတ်ကြီး မဟာပဏ္ဏိစ္စ လျှောက်သည်ကား..
‘’အရှင်မင်းမြတ်.. စစ်ကဲ- ငရွှေရသည်၊ ရခိုင် မှူးရိုး မတ်ရိုး မဟုတ်ပါ။ သင်း၏ဘေးဘိုး အက္က ပတ်၊ အမိမျိုးကား- ကုလားပသီ ၊ ဗျတ္တိအရာ၌လည်း ဆရာကောင်းတို့နည်းကို မရ၊ ၀ိလုပ္ပန္န၊ အဓမ္မအရာ သူခိုး ဒါးပြ တို့နှင့် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံသူဖြစ်၍ ကိုက်တတ်သော ခွေး၏ ပမာ၊ စစ်အင်္ဂါလေးပါးကို နား လည်ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်ပါ ။ ဇာတိဝံသ၊ သာကိယအစစ်၊ ဧကရာဇ်မင်းမြတ်နှင့်လည်း အဘက်မတန် သမင်ယုန်ငယ်၊ ပြက်ရယ်ပြုသော အလေ့ ကို ခြသေ့င်္မင်းအကြံဖြင့်၊ မှောက်လှန် ဖျက်ဆီးဘိသကဲ့သို့ ယခု စစ်ကဲ-ငရွှေရမျှသော တပ်ကို ပြည့်ရှင်မင်းတို့၊ အရေးမယူသင့်ပါ။ ’’ ကျွန်တော် မှူးမတ်တိုကတာ ၀န် ဖြစ်ပါတော့သည်။’’ဟု လျှောက်ထားလျှင်….. အမတ်ကြီးပဏ္ဏိစ္စ လျှောက်ပြန်သည်ကား……
‘’အရှင်မင်းမြတ်..ရန်သူတပါးကို နှိမ်နင်းခြင်း၌၊ ဓနဥပါယ်၊ ဒါနဥပါယ် ၊ သာမဥပါယ် ၊ဘေဒဥပါယ် ဟူ၍ ၊လေးပါး ရှိပါသည် ။ ထိုလေးပါးတို့တွင် ဒါနဥပါယ်ဖြစ်သော ပေးကမ်းခြင်းကို မပြုလိုလျှင် ရန်သူ ဖြစ်သော မင်း၊မှုးမတ်၊ ဗိုလ်ပါ၊ ရဲမက်တို့ အချင်းချင်း၊ သဘောနေ သဘောထား ကွဲပြားပျက်စီးအောင်၊ ဘေဒဥပါယ် ဖြင့်ပြုရပါသည်။် ယင်းသို့သောအကြောင်းဖြင့် မပြုလိုလျှင် ဒဏ်ပေးခြင်း အစရှိသော တိုက်ခိုက်ရန် အရေးနှင့် အလှေးရန်သူကို ဆံမြူ မမှတ် ၊ သတ်ဖြတ် သေစေခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်ရပါသည်။ ယင်းသို့သော အကြောင်းဖြင့် မပြုလုပ်လိုလျှင် သာယာ ချေငံသော စကား ကို ပြော ဆို ကြေ အေးစေခြင်း စသော သာမ ဥပါယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ရပါသည်။ ထိုသို့လျှင် မင်းတို့ ကျင့်ဘွယ် ဥပါယ်လေးပါး၏ အကြောင်း " ဟု လျှောက်ထားလျှင်……
‘’စစ်ကဲ-ငရွှေရ မျှသော သူကို ဒဏ္ဏ ဥပါယ်ဖြင့် အောင်မြင်ပြီးစီးအောင် ဖမ်းဆီး သတ်ညှဉ်းခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်ရမည်’’ဟု အမိန့်တော်ရှိ၍- အမတ်ကျော်ကို အကြီးပြုလုပ် ချီတက် သိမ်းယူစေရန် တပ်တော် ခင်းကျင်း စီတန်း ရှိနေစဉ်-
ရွှေအင်းတောင်မြတ်စွာဘုရားတွင် ဇေယျမင်္ဂလာ ဟူသော နာမံကမ္ဗည်း၊ မော်ကွန်း ဆက်ကပ်ခြင်း အောင်လံတော် မှာလဲ ဇေယျမင်္ဂလာ ဟူသော အက္ခရာကို ရေး၍ မြို့ဦးအရပ်မှာ စိုက်ထူခြင်းတို့ကိုပြု လုပ်စေသည်။
ထိုသို့လျှင် မြတ်စွာဘုရား၌ နာမံတော် မှည့်ခြင်း အောင်လံဦး၌ ရေးမှတ်ခြင်းပြုလုပ်သော ခဏ တွင် ရခိုင်ပြည်ကို ဇိနပေါကံ္ကတိုင်းသားတို့ တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးကြောင်းနှင့် ကြားသိရသည်တရပ်။ ရခိုင် တပ် အလုံးကို သုံ့လူဖြစ်အောင် တောင်တွင်းကြီး မြို့ က အထပ်ထပ်ဝန်းရံ ဖမ်းဆီးအံ့ သကဲ့သို့ ထင်မြင်ထိတ်လန်ကခြင်း ဖြစ်ကြသဖြင့် ရခိုင်တပ်သား သည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး ကူးလူး၍ မဆင့်မဆိုနိုင်၊ ကိုင်မိကိုင်ရာအ၀တ်အစား၊ လက်နက်များကို အင်အားအလျောက် ၊ဆောင်ယူထွက်ပြေး ကြသည်ကား - ကြားမြင်သော သူအပေါင်းတို့သည် မြေပြိုအံ့သကဲ့သို့ ထင်၏။- ဟူသောစကားကို ထင်၇ှားပြောဆိုလေ့ရှိကြသည်။
နှမတော် မယ်စောအရေး ဆွေးနွေးခြင်း
တရံရောအခါ မင်းကြီး မင်းပြောင်သည် နှမတော် မယ်စောလည်း အချိန်အရွယ် ရောက်သည် နှင့်- ‘’သားမိန်းမအား၊မြင့်ရှည်ထားက၊ မောင်ဘွားမိဘ အရှက်၇၏’’ ဆိုသောစကားကဲ့သို့ လည်း ကောင်း။ ‘’စကြ၀တေး မန္ဓာတ်မင်းဖြစ်လင့်ကစား အခြားသူတို့နှင့် အလိုတူခဲ့လျှင် မိဘမောင်ဘွား လင်သား စသော သူတို့ကို မိမိ လက်အောက် စေခိုင်းသော ကျွန်ကဲ့သို့ မှတ်ထင်ခြင်း ။ အသန္တ မန္တဇာတ်တွင်လည်း ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်းအလုံးကို သိမ်းကြုံးပြသ ၊ နေ့ညသင်ကြား၍ နေ သော တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဒိသာပါမောက္ခ အမှုးကို တစ်ဦးသောလုလင်ငယ်နှင့် ချစ်ဘွယ် စကား၊ ရသော အားဖြင့် ကြီးမားသက်ရွယ် စက္ခုဝယ် အလင်းမရ အိုမင်းလှသော အမိသည်၊ သိသိကျေပျောက်၊ ပုဆိန် နှင့်ပေါက်သော သာဓက။ အန္ဓဘူတဇာတ်တွင်- ပုရောဟိတ်လုလင်သည် ကြန်အင်စုံ မိန်းမကို သန္ဓေက မွေးမြူ၍ ကလေးမူ ယွင်းပျောက် ဆောက်နှင်းလောက်အောင် ၊တစ်ယောက်ထီးတည်း၊ တံတိုင်းဆီးသော သမီးလုလင်း၊ ပုရောဟိတ် သက်လုံး ကြင်သည် ၊ ခင်မင်လောက်သူ၊ သရောက်လူနှင့်၊ အတူနှစ် ကို ၊အလိုတူပေါင်းဘက်၍ ပျက်စီးရသည်။ အကြောင်းများ ကို အောက်မေ့မြော်ခေါ်တော်မူပြီး လျှင် ညီတော် အငယ်မင်းနဂါး နှင့် ထိမ်းမြားလိုသော အကြံတော်ရှိသည်။ ယင်းသိုက အကြံတော်ရှိသော်လည်း မှူးမတ်တို့အား ၇ှက်နိုးတော်မူသည်ဖြစ်၍ မဆိုနိုင် မဆိုအား ရှိသည်နှင့်၊ မင်းတို့ ဥပါယ်ဖြင့် နှမတော် မယ်စောကို ခမည်းတော်ရှိရာ မဇ္ဈိမဒေသ၊ ကာလိင်္ဂရွှေပြည်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆက်လို ကြောင်းကို တိုင်ပင်တော်မူသည်။ ယင်းသို့တိုင်ပင်တော်မူရာ မဟာပဏ္ဍိစ္စ၊ မဟာဝိဒူရကျော်ခေါင် အမတ်ကြီး ၂-ယောက် တို့ လျှောက်ဆို သည်ကား-
အရှင်မင်းမြတ်……. .ရေမြေသနင်း၊ မင်းတို့ကျင့်ထုံး၊ သုံးပါးသောသတ္တိရှိပါသည်။ သတ္တိသုံးပါး-ဟူသည်ကား….
ဘုန်းလက်ရုံးတော်ကို ထင်ပေါ်ကျော်စော လောကဓာတ်မြေ၊ ပတ်ပတ်မွှေအောင်၊ ကျက်သရေတော်ကို ထွန်းလင်းစေခြင်းသည် ပဘာဝသတ္တိ၊၊ ရှိရသမျှသော တာဝန်၊ ယုတ်လွန်နောင်တ၊ မရှိ၇အောင် လုံ့လတော်မူခြင်းသည် ဥဿဟသတ္တိ။ မိမိသဘော၊ အာရုံပင် စောသော်လည်း၊ အတ္တ-နော မတိ၊ မရှိစေလို ‘’ထိုထိုမှူးမတ်တို့နှင့် မပြတ် တိုင်ပင်တော်မူခြင်းသည် -မန္တသတ္တိ’’ ၊ ယင်းသုံးပါးသော သတ္တိတို့တွင် မန္တသတ္တိဖြင့်နှိုင်းညှိတိုင်ပင်တော်မူသော အရေးသည် ဘေးလောင်းတော်ဖြစ်သော ပါရမီဒဗ္ဗ၊ သမ္ဘာရ အဆောက်အဦ၊ ထီးဖြူဆောင်းမင်းတို့၏ တိုင်ပင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်၍ ရေမြေ အတန်တန်ရှိသော လမ်းခရီးမှာ မှူးမတ်၊ အမှုထမ်းတို့ မနွမ်းမနယ်၊ အန္တရာယ်မငြိ ဘေးမရှိဘဲလျက်၊ မဇ္ဈိမဒေသ၊ ကာလိင်္ဂရွှေပြည်က၊ စစ်သည်များစွာနှင့် ရတနာတင်းတိမ် ရွှေပြည်တော်သို့၊ သုံးဆယ့်နှစ်(၃၂) စခန်းသောကွန်းထောက်နှင့် ဆိုက် ရောက်တော်မူလျှင်၊ အဆူ ဆူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ထံ ပန်ဆင်တော်မူခဲ့သော ပါရမီအ လျောက်၊ ပဋိရူပ၊ဒေသအချက်၊ စက်လေးပါး ညီညွတ်သော တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကို၊ ထီနန်းတည် ထောင် စံနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရေအတန်တန် ၊မြေအတန်တန်၊ ခြားနား၍ ရှိသော မဇ္ဈိမဒေသေ၊ ကာလိင်္ဂရွှေ ပြည်တော်ကြီးသို့ နှမတော်မယ်စောကို ပြန်ပို့ရမည့်အရေးမှာ ဘေးအန္တရာယ်၊မတွယ်မငြိ၊ အလိုတော် ရှိတိုင်း ၊ မဆိုင်းမတွ၊ ရောက်စေကာမူ- ခမည်းတော်မင်းတရားကြီးလည်း အိုမင်းမစွမ်း၊ ကုသိုလ်တော် စဲခန်း၍ ၊ ရွှေနန်းတော်ရွှေဘုန်း ညှိုးခဲ့သည်ရှိသော် မောင်တော်လေးပါးကဲ့သို့ ပိုက်ဖြားယုယ၊ စောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်သူ မရှိပါ ။ နောင်လာနောင်ဂတ် ကောင်းမြတ်နိုင်ရာ သော အကြောင်းမဟုတ်၊ ဖြစ်ပါသောကြောင့်၊ ပြန်ပို့တော်မူခြင်းငှါ မသင့်ပါ ။ နှမတော် မယ်စောသည်လည်း သာကိရဥက္က|် မြတ်သောမင်းမျိုးဖြစ်သည်နှင့်အညီ၊ စံမှီဦးသစ်၊ မ္ဗူရာဇ် ရွှေကို ပင်သပြေ ညွန့်ဖျားမှ ၊ ဖြစ်ပွါးသော နီဖလံနှင့် မီးပြန်၍နှောကြသည်လျှင်၊ အရည်မခြား ရွှေနှစ်ပါးသည်၊ တသားတည်းထင်သကဲ့သို့ အရှင်မင်းမြတ်၏ ညီတော်သုံးပါးတွင်၊ တပါးပါးနှင့် စုလျားရစ်နှောင်ရလျှင်၊ ရွှေနှင့်ရွှေရည်၊ ဂဟေမစပ်၊ အနေမြတ်၍ သေ၀ပ်တင့်တယ်ရာသော အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမှတပါးလည်း ဘိုးတော်ဇာလီမင်းကြီးသည် တမိ တဘ၊ ခတ္တိယအစစ် စံတူဖြစ်သော၊နှမတော် ကဏှာမင်းသမီးနှင့် ရွှေထီးဥကင် ဖွင့်ပါသည်။ ဥက္ကာရာဇ်၊ ထွတ်သင်္ကျစ်တို့ သည် ၊နွယ်စစ်မခြား ၊မောင်ဘွားနှမ၊ စုံဖက်တော် မူကြ၍ ကပိလရွှေပြည်တွင် ၊ အရှည်လေးမြင့်၊ ရွှေဥကင်ဖွင့်ပါသည်။ သီဟသီဝလိ မင်းသမီးနှင့် ၊မောင်ကြီးအရင်း ၊ သီဟဗာဟုမင်း တို့လည်း၊ ထွန်းဝင်း တောက်ပ၊ ဘုန်းပြိုင်တော်မူကြ၍၊ သီဟဿ၇ ရွှေပြည်၊ ထောင်တည်ပြုစုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလောင်းတော် ရာမ၊ ပဏ္ဍိတနှင့် ၊နှမရင်းသီတာ၊ မင်းနှစ်ဖြာတို့လည်း၊ မဟာဇေယျတု ၊ရေခရုသွန်းလောင်း၍ ရှစ်သောင်းမက မြို့ပြထီးနန်းကို မင်းခန်း ကျင်းပတော်မူပါကြောင်း။ ထိုသို့လျှင်-မောင်ရင်းနှမ၊ ခတ္တိယမျိုးဘော်၊ ဆက်ဆံတော်မူသည်အကြောင်းမှာ- တပါး သူတို့နှင့် အဘက်မတန်၊ မဆက်ဆံ မရှည်ထိုက်သော အရာ ဖြစ်၍ မောင်နှမ၊စုံဖက်ကြသော ဥပဒေ၊ ပဝေဏီ ထုံးများကို ၊ထောက်ထားမြော်ခေါ်တော်မူ၍၊ ညီတော်သုံးပါး၊ တပါးပါးနှင့်၊ ပတ္တ မြားလျှံညီ၊ တမုတ်ကြိုးသီရလျှင်၊ ပါရမီရှေးရိုး၊ ဘုန်းတော်တိုး၍ အကျိုးများပြားရန်အကြောင်း၊ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့၏ တံထွာ၊ ဘေးကာရန်ဆီး၊ တထီးတနန်း ပေးကမ်းသင့်လျော်ကြောင်းများနှင့် လျှောက်ထားလျှင်……………….
အမတ်ကြီး ၂-ဦးတို့ ၊လျှောက်သော စကားသည် ၊ပြည့်ရှင်မင်းနှလုံးကို ယူကြုံပြီးမှ၊ ဂေါသီတစန္ဒကူးတွင် အထူးနှစ်ထားဘိသကဲ့သို့၊ အလွဧးမြ၊ အားရနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ညီတော်အငယ်-မင်းနဂါးနှင့် ဘုန်းပြိုင်စေပြီးလျှင်၊ အမှုထမ်းဆင်မြင်းအပြည့်အစုံနှင့် ၀ါးနွယ်ကုန်းမြို့ကို အစားကံကျွေးခံ၊ ပေးသနားတော်မူသည်။ ထိုရောအခါ -ပေါကံ္ကပြည်တွင်၊ သက္ကရာဇ် ၁၉၁ ခုနှစ်၊ နန်းတက်တော်မူသော ခဲလူးမင်း။ ဓည၀တီပြည်လောင်းကြက်မြို့မှာ- မိဖုရားဘွားမင်းစိုးကို နန်းမြှောက်၍ မင်းတက်ခါး နန်းစံသည်။ ပြည်မြို့မှာ- မင်းကြီးထွေးနန်းစံသည်။ ကေတုမတီ တောင်ငူမြို့မှာ- မင်းဖောင်းကား နန်းစံသည်။ ထိုမင်းတို့သည် တောင်တွင်းကြီးမြို့ မင်းပြောင်နှင့်နန်းပြိုင်ဖြစ်သည်။
ထိုမင်းကြီး မင်းပြောင်သည် ညီတော် ၊နှမတော် ၊မှူးတော်၊ မတ်တော်၊ ဆွေတော် ၊မျိုး တော်တို့ အကျိုးစီးပွား၊ သာသနာတော်၏ အကျိုးစီးပွား၊ ရဟန်း ရှင်လူပြည်သူသတ္တ၀ါတို့၏ အကျိုးစီးပွားများကို တရားသဖြင့် ရွက်ဆောင်တော်မူ၍ သက္ကရာဇ် ၂၁၅ခု၊ တပေါင်းလဆန်း ၃ရက် ၊ စနေနေ့ ည ၂- ချက်တီးအချိန်၊ နန်းစံ -၂၄နှစ်တွင်၊ နတ်ရွာစံလွန်တော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် ညီတော် မင်းရောင် မင်းပြုတော်မူသည်။ ထိုမင်းကောင်းမှု’’ဂူကြီး၊ဂူဖြူ ဂူနီ၊ ဂူတုပ်’’ ထိုဂူလေးလုံးကို တည်တော်မူပြီးမှ စည်းစိမ် ၅ နှစ်တွင်အနိစ္စေ၇ာက်တော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် ညီတော် မင်းနောင် မင်းပြုတော်မူသည်။ ထိုမင်းကောင်းမှု ရွှေညောင်အုပ်ဘုရား ၊ရွှေဘုံသာဘုရား ၂ ဆူကို တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသည်။ နန်းစံ ၅ နှစ်တွင် နတ်ရွာစံ သည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် ၀ါးနွယ်ကုန်းမြို့တွင် ရှိနေသော ညီတော် မင်းနဂါးကို မှူးမတ်တို့သွား ရောက်ပင့်ခေါ်ရာ၊ တိုင်းရေးပြည်မှုကို ကြောင့်ကြမကင်း ရှိတော်မူသည်နှင့် နှမတော်မယ်စောကို ထားခဲ့ပြီးလျှင် ဆင်မြင်းလက်နက်အစုံနှင့် လိုက်လာ၍ သက္ကရာဇ် ၂၂၅ခု၊ တော်သလင်းလဆန်း ၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ရွှေနန်းတက်တော်မူသည်။ ထို့နောက် ငမင်မြို့စားအမတ် ငသော်တာ သမီး ရှင်မြတ်လှကို မိဖုရား မြှောက်တော်မူသည်။
ရှင်မြတ်လှ အကြောင်းကား -ငယ်စဉ်အခါ၊ မိမိဆံထုံးမှ၊ ကျွတ်၍ကျသော ဆံစုကို၊ စွန်ရဲ တခု ချီယူပြီးလျှင်၊ ရွှေအင်းတောင် ဘုရားအရှေ့၊ တာ ၅၀ ကွာတွင် ပစ်ချ တွေ့ရှိသည်။ ထိုအ ကြောင်းကို သိကျွမ်းလိမ္မာသူတို့ကို မေးရာ- '’ထိုစံစုကျသောအရပ်တွင် ကောင်းကြွယ်ချမ်းသာ ၍ကောင်းမှု ကုသိုလ် အထူးပြုလုပ် ကြီးပွားအံ့သည် ‘’ ဟုပြောဟောကြ၏။ ထိုရှင်မြတ်လှသည် ဥပထမ္ဘကံ ထောက်ပံ့ရန် အချိန်စေ့ရောက်သည်ဖြစ်၍ ရွှေအင်းတောင်မြတ်စွာဘုရားကို အဖူးအမြှော်ရောက်လှာရာ မင်းကြီးမင်းနဂါး မြို့လှည့်တော်မူခိုက် ကြိမ်ကြိုက်တွေ့မြင်တော်မူသောကြောင့်၊ အိမ်ထောင်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းကို လျှောက်ထားကြားသိတော်မူလျှင် ရွှေဝေါတော်နှင့် တင်ဆောင်ခေါ်ယူ၍ မိဖုရားအရာ မြှောက်တော်မူသည်။
မိဖုရားဖြစ်လျှင် ဆံစုကို စွန်ချီ၍၊ ပစ်ချတွေ့ရှိသောအရပ်တွင် စေတီတစ်ဆူ တည်ထားကိုး ကွယ်သည်။ ထိုစေတီကို ဆံချဘုရား ဟုသမုတ်သည်။
ထို့နောက်၊ ထိုဘုရားတွင် ဆွမ်း-ရေချမ်း- ပန်း သစ်သီးတို့ကို အကြီးအကျယ် တင်လှူပြီးလျှင် ဤပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ကို အရင်းထား၍၊ နိဗ္ဗာန်မ၇မီသောဘ၀တိုင်အောင် ကျင်လည်လေရာ သံသရာအဆက်ဆက်တို့၌ နှစ်ခြိုက်သောသူနှင့် အတူပေါင်းဘက်ရသမျှ ကာလပတ်လုံး သူတပါးလက်အောက် မနိမ့်မကျ မယားအကြီးသာလျှင် ဖြစ်ရခြင်း၊ ဤကဲ့သို့သော ကုသိုလ်စေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်ရခြင်း စသော ဆုမြတ်ကို မပြတ်တောင်းလေ့ရှိသတည်း။ ထိုဆုတောင်းသော အလျောက် တောင်းသောဆု အတိုင်း ပြည့်စုံသောကြောင့်၊ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားဟု ထပ်မံသမုတ်တော်မူသည်။
မင်းကြီးမင်းနဂါးလည်း ရှင်မြတ်လှ၏ အပြင်အလျာ၊ လက္ခဏာ ကြန်အင်၊သဏ္ဍာန်ရုပ်ရေ ပြစ်ပြေချောမွေ့၊ တနေ့တခြား မေတ္တာတော်တိုးပွားသဖြင့်၊ မယားဟောင်းဖြစ်သောနှမတော် မယ်စောကို၊ သဘောမှတ်မဲ့၊ သတိတော်လွတ်ခဲ့သဖြင့်၊ လေးတွဲ့ဖင့်လျား၊ သွား၍မခေါ်ရှိစေကာမူ၊ လူသူကိုမျှ မစေလွှတ်၊ ယွင်းချွက်နှောင့်နှေး၊ အရေးမယူ ရှိတော်မူသော အကြောင်းအ၇ာများကို မယ်စော ကြားသိတော်မူလျှင်….. ဤအရပ်ဒေသတွင် ဇာတိဂုဏ်၊ ပုညဂုဏ်၊ မဟတ္တဂုဏ် လုံးစုံတူမျှသူမရှိ။ တမိတဘ၊ အသမ္ဘိန္န၊ ခတ္တိယရင်နှစ်၊ သာကိရမျိုးစစ် ဖြစ်တော်မူသော နှမတော်နှင့် ဆက် ဆံထိုက်သည်ဟု မောင်တော်သုံးပါး၊ စုလျား၇စ်နှောင်၍ အခေါင်အဖျား၊ ထိမ်းမြားလက်ထပ်တော်မူသည်ကို မထောက်၊ အထွတ်အမြတရောက်လျှင်ပင် ငမင်မြို့စားသမီးကို မိဖု၇ားခေါင်ကြီးမြှောက်စား၍ ထားရာဘိသလော၊ ဒေါသမူဇောကို၊ သဘောအာရုံစိုက်လျက် နောက်လိုက်နောက်ပါ၊ အနည်းငယ်နှင့် ညချမ်းအခါ၊ ၀ါးနွယ်ကုန်းကျေးရွာက၊ ထွက်လှာတော်မူခဲ့၍၊ တစ်ခုသောတောင်ကြားသို့ရောက်လျှင်၊ သောက်တော်ရေအိုးသည်၊ အလျောက်ဘာသာ လေမလာလူမကိုင်ဘဲ၊ ယိမ်းယိုင် လဲမှောက်လေသည်။ ထိုအရပ်ကို ယခုတိုင် အိုးမှောက် ဟုခေါ် ဝေါ်သမုတ်သည်။
ယင်းသို့သော နိမိတ်၊ မကောင်းဟိတ် အရိပ်အမြွက်ပြပါလျက်လည်း၊ ငဲ့ကွက်မရှိ၊ သတိမမူ ကျွတ်ကျွတ်ဆူသော၊ နေပူပြင်းရှိန်ကို၊ အချိန်မရွေးလာပြန်ရာ တစ်ခုသောတောအုပ်သို့ ရောက်လျှင် မယ်စောကို ကျားကိုက်ချီယူသွားလေသည်။ ထိုအရပ်ကို မယ်စောကြောဟု ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည်။
မယ်စောကိုးပိုင်း - ကျားကိုးပိုင်း
ထိုအကြောင်းများကို နယ်ရှင်လူကြီးတို့လျှောက်ထား၍ မင်းကြီးမင်းနဂါး ကြားသိတော်မူလျှင် မှူးမတ်ခြွေရံတို့ကိုမခေါ်၊ သင့်လျော်ရာ ကျေးကျွန်နှင့်သွား၍ အနီးအပါးရှိနေသော မုဆိုးတို့ကို ဆင့်ဆိုဖမ်းယူစေ၇ာ ကျားအရှင်ကို ဖမ်းယူဆက်သရလေ၏။ မင်းကြီးမင်းနဂါးလည်း ယူကြုံးမရ၊ လွန်မောသော ဒေါသကို မသိမ်းနိုင်သောကြောင့် လက်သုံးတော်ဓါးနှင့် ကိုယ်တိုင်ထ၍ ခုတ်သည်။ ကျား ကိုးပိုင်း ပြတ်သည် ဟူ၏။ မယ်စောအလောင်းကို ကောင်းမွန်စွာသဂြိုဟ်ရန် လိုက်ရှာရာ အရိုးအသား လက်ခြေများကို ကိုးဌာန အ၇ပ်မှ ရှာဖွေ၍ ရသောကြောင့် ထိုဌာနအရပ်ကို မယ်စောကိုးပိုင်း၊ ကျားကိုးပိုင်း ဟု ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြသည်။
ထိုအရပ်က ပြည့်ရှင်မင်း ပြန်လှာရာ နှမတော် မယ်စောကို လွမ်းဆွတ်တရူ၊ ညောင်းမောတော်မူ၍ ခိုဝင်နားနေသည့် ထိုအရပ်ကို ညောင်းမောဟု တွင်သည်။ စကားရွေ့ယုတ်၊ ရှေ့ဆီးဝိသဇ္ဇနီ တိမ်မြုပ်သဖြင့် ယခု ညောင်မော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်လေသည်။
မှူးမတ်တို့ အကြိုတော်လာရောက်၍ ရတနာပြောင်မွန် ဆင်တော်ချည်ထားသောအ၇ပ်ကို ယခုတိုင် ဆင်ချည်တိုင် ဟု သမုတ်သည်။
ထိုအရပ်က မှူးမတ်တို့နှင့် တွေ့ကြိမ်ဆုတ်ခွါတော်မူခဲ့၍ တစ်ခုသောအရပ်သို့ ရောက်လျှင် မယ်စောကိုယ်စား တောင်သို့ ဦးခေါင်းလျောင်းတော်မူလျက် တည်ထားသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ယခုတိုင် တောင်လျောင်းဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည်။
ထိုမှတဖန် ထွက်လှာပြန်ရာ ကြံ့ထိုးသော လူ၂၀ (နှစ်ဆယ်တို့) ကြံ့သွေး ကြံ့ခွါများကို ဆက်သ၍ ကျေးရွာပြုစု နေထိုင်လိုကြောင်းနှင့်၊ လျှောက်ထားချက်အရ ကျေးရွာတည်ထား ပေးအပ်တော်မူသည်။ ထိုအရပ်ကို ကြံ့ထိုးရွာဟု တွင်သည်။ စကားရွေ့လျောသဖြင့် ကြံစို့ရွာဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြသည်။
မင်းကြီးမင်းနဂါးသည် ထိုအရပ်မှတဖန် ချီတော်မူ၍ လာရာ၊ တစ်ခုသောအရပ်သို့ ရောက် လျှင် တောင်နေတောင်ဝှမ်း၊ မအံ့မခန်းမျှ၊ ထူးဆန်းတင့်တယ်၊ သက်ငယ်ဝါးရုံ၊ ရဂုံအလျောက်၊ ပေါက်ရောက်ညို့မှိုင်း၊ သစ်ပင်တိုင်းလည်း၊ ဆိုင်းဆိုင်းမြမြ၊ တချို့ကပွင့်၊ တချို့ဆင့်လျက်၊ နိမ့် မြင့်မတူ၊ မြေငူမြေစ၊ မဇ္ဈိမဒေသနှင့် တမျှ တူညီသောအရပ်ဖြစ်သည်ဟု ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ရပ်နားစံနေတော်မူသည်။ ထိုအရပ်ကို ရပ်အနား ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည်။ ယခု စကားရွေ့လျောသဖြင့် ရပ်မနား။ ထိုစကားကိုတဖန်၊ ရွေ့လျောပြန်သဖြင့် ရွာမနား ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။
ထိုမင်းကြီး မင်းနဂါးသည်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ဇောတိ-ဇောတ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မပြု၊ မျိုးစပါးကို ထောင်းဖွပ်၍စားသောယောက်ျားကဲ့သို့ ပထမဘ၀က ပြုခဲ့ဘူးသော ကောင်းမှု၏ အရှိန်အစော်ကိုသာ ခံစားစံစား၍ ရွှေန်းစည်းစိမ် ၅-လနှင့် အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။
ထို့ကြောင့် အမျိုးကောင်းသား၊ ယောက်ျားမြတ်တို့သည်လည်း ထိုမင်းကဲ့သို့ မဖြစ်စေရ၊ မျိုးဟောင်းထက်ကား မျိုးသစ်ပွားလျက်၊ တရားတော်လမ်းနှင့်အညီ၊ သီလ၊ဒါနတို့ကို ကြိုးစား အားထုတ်ကုန်ရာသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် မင်းနောင်၏ သားတော်- စောမည်း သက္ကရာဇ် ၂၂၅-ခု၊ ပြာသိုလဆန်း ၆ ရက်၊ စနေနေ့ နန်းတက်တော်မူသည်။ ပုဂံပြည်- သိန်းခိုမင်း၊ ပြည်မြို့- နရပတိမင်းတို့နှင့် နန်းပြိုင်။ ထိုမင်းလက်ထက် ဘကြီးတော် မင်းပြောင် စီမံခန့်ထားရင်းအတိုင်း ငမင်၊စစ်တား၊ဗိဿ နိုး၊မြို့လုလင်မြို့များမှာ၊ အစောင့်အနေ၊ အသီးသီးများနှင့် ခန့်ထားစောင့်နေစေသည်။
မြို့တောင် ဗိမာန်ကြီးဘုရားကို နန္ဒမူလိုဏ်၏ သဏ္ဍာန် ကြောင်လိန်၊ နတ်ပေါက်များနှင့် တည်ထားပြုစုတော်မူသည်။ ထိုမင်း စည်းစိမ် ၄၅ နှစ်တွင် အနိစ္စ ရောက်တော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော်-မင်းရဲငယ် သက္ကရာဇ်၂၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် မင်းလုပ်တော်မူသည်။ ပုဂံပြည်- တောင်သူကြီးမင်း ပြည်မြို့ သတိုးသီဟသူမင်းနှင့် နန်းပြိုင်။ ထိုမင်းသည် ကုသိုလ် ကောင်းမှုများကို အထူးမပြု၊ ဘိုးတော် ခမည်းတော်တို့၊ တည်တော်မူခဲ့ရင်းအတိုင်း စည်းစိမ်ကိုသာ ခံစား၍ နန်းစံ ၃ နှစ်တွင် အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော်မင်းကလေး နန်းတက်၍ စည်းစိမ် တစ်နှစ်တွင် မိဖုရား ရှင်စောလှ ဆေးခတ်သော စားတော်ကို စားမိသဖြင့် အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော် သီဟပတေ့ငယ်- သက္ကရာဇ် ၂၇၄ ခုနှစ်၊ မင်းလုပ်တော်မူသည်။ ထိုမင်း လက်ထက် အတွင်းစည်းခုံဘုရားကို ထပ်မံပြင်ဆင်ပြုလုပ်တော်မူသည်။ စည်းစိမ် ၁၆နှစ်တွင် အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။ ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော်- ဒလကျောင်းဒါယကာ၊ သက္ကရာဇ် ၂၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် မင်းပြုတော်မူသည်။ ပုဂံပြည်-ကျောင်းဖြူမင်းနှင့် နန်းပြိုင်။ ဒလကျောင်းဒါယကာ တွင်ကြောင်းကား- သထုံပြည်၊ သောဏထေရ်၏ ဂိုဏ်းနေ၊ အဆက် အနွယ်ဖြစ်သောရဟန္တာ ဒွေး၊ အရှင်သီလမထေရ်သည် ကံကြီးကံငယ် ရွက်ဆောင်နိုင်လောက်အောင်၊ တပည့်သံဃာ ၅ ပါးနှင့် ကြွရောက်တော်မူလာသည်ကို မြို့တော်တွင် ကျောင်းရံ ၂၀ နှင့် ဇေတ၀န် လေးထပ်ကျောင်း ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ်တော်မူသည်။ ၀တ္တကမြေကိုလည်း နယ်နိမိတ် ပိုင်းခြား၍ ကျေးရွာတည်ထား လှူတော်မူသည်။ ထိုရွာကို သီလရွာဟုသမုတ်တော်မူ သည်။ ထိုရဟန္တာ အရှင်သီလမထေရ်သည် ဒလက ကြွလာတော်မူရင်း ဖြစ်ဖြစ်၍ ထိုကျောင်းလည်း ဒလကျောင်း ဟုတွင်သည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော်- သက်တော်ရဘုရားဒါယကာ မင်းပြုတော်မူသည်။ မြို့တော်အ တွင်း သက်တော်ရဘုရား၊ သက်တော်ရှည်ဘုရား၊ ၂ ဆူကို တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသည်။ ထိုဘုရားနှစ်ဆိုကို တည်တော်မူသောအကြောင်းမှာကား… ထိုမင်းငယ်ရွယ်စဉ်အခါ၊ မမာမကျန်း ရှိတော်မူလျှင် ခမည်းတော် မယ်တော်တို့သည် သက်တော်ချမ်းသာ၍ ကျန်းမာသုခရှိလေအောင် ရည်ဆောင်ယတြာပြု၍ သားတော်ကိုယ်လေး ရွှေ ငွေ ချိန်စက်ပြီးလျှင် ထိုရွှေငွေများ နှင့် သက်တော်ရှည် သက်တော်ရဟု၊ နာမံ ကမ္ဗည်း၊ စိုက်မှတ်တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသည်။
တရံရောအခါ ထိုမင်း၏ ကိုယ်လုပ်တော်တစ်ယောက်သည် အပြင်အလျာ ချောမောပြေပြစ် သည်ဖြစ်၍ မာန်တက်ခြင်း ငါးပါးတွင် အဆင်း၏ မာန်တက်ခြင်းဖြစ်သော၊ ရူပ ဥဏှပြင်းထန်လှ သောကြောင့် ပြည့်ရှင်မင်း၌ မခိုင်းမနှိုင်း ပြုသည်ကို မင်း၏မာနဖြင့် ဆင်နှင့် နင်းသတ် ကွပ်ညှပ် စီရင်မည် ရှိသည်တွင်……….
ကိုယ်လုပ်မိဖုရား၏ မောင်ဖြစ်သော အမတ်ငရဲနွှဲ့သည် နှမတွင်ချစ်စိတ်၊ ယိုဖိတ်အားကြီးသည်နှင့် ပြည့်ရှင်မင်းအား ရှိခိုးတင်လျှောက်၊ ခွင့်မရလျှင်၊ နှမနှင့်အတူကွပ်ရာပါလေ၏။
မောင်ကား…….ငမင်ရိုးမတောင်တွင် ငရဲနွဲ့မည်သော နတ်ဖြစ်လေ၏။
တရံရောအခါ ထိုမင်း တောကစားသွားရာ… ဥပါခက်နှင့် တွေ့၍၊ ဥပါခက်မလည်း၊ မင်းနှင့် မွေးဘွား၊ သားသမီး ၂ ယောက်၊ ကျန်ရှိသည်ကို ချစ်ခင်စုံမက်၊ တသက်သက်နှင့်၊ ယိုထွက်မျက်ရည်၊ တလည်လည်ကို မဆည်နိုင် မဖြေနိုင်၊ လွမ်းဆွတ်ကာ မှိုင်လွန်းလို့၊ အနိုင်စိတ်တင်း၊ မိန်းမယောင်ဖန်ဆင်းလျက်၊ မင်းနှင့်သံဝါသ၊ သဘောတူ စုံမက်ကြ၍၊ ကာလရှည်လျား၊ မင်းမြတ်ဖျားလည်း၊ သနားမေတ္တာ၊ ရှိဘူးသည့်ဝါသနာကြောင့်၊ မခွါနိုင် မခွါအား၊ ထိုတောကြားတွင် မြောက်သားတော် ဘီလူးမနှင့် ၂-လလုံးလုံး ကြာတော်မူသည်။ မှူးမတ်ပြည်သူတို့လည်း၊ မင်း၏ဖြစ်ဟန်၊ တိုင်းပြည်သို့ မပြန်ဘဲ တောင်ယံတောခြေတွင်၊ တောဧကရာဇ် တောဖြစ်ပီပီ၊ တောကိုမှီ၍၊ တောဆီတောဥနှင့်၊ ယခုပျော်ပါး၍ ရှိချေသည်။ မည်ကဲ့သို့ ကြောင်းကို ကောင်းကောင်း မသိရ။ ဤဒေသတွင် ပါလရုက္ခာ၊ ဘုမ္မာယက္ခ စသော နတ်တို့ကို တင်ကြားပသ၊ မင်းသံချ၍ မေးသည်တွင်- မောင်ဖြစ်သောနတ်စိမ်း ငရဲနွဲ့သည်၊ ကိုယ်လုပ်တော်ဘ၀၊ ဆင်နင်းစက၊ တောဝပျော်မြူး၊ ဘီလူးဥပါခက်၊ ဖြစ်ပျက်သမျှ အလုံး စုံကို အကုန်ပြန်ပြောကြားသိရလျှင်……
ငရဲနွဲ့နတ်ကို ငမင်တောင်၌ နတ်ကွန်းဆောက်လုပ်ပေးအပ်၍ ၀ါခေါင်လတိုင်ရောက်လျှင်၊ မင်းမိဖုရား၊ သားသမီးတော်၊ မှူးမတ်ပြည်သူတို့အစုံ၊ တနှစ်တကြိမ်၊ သွားရောက်တိုင်ကြား ပသ ပူဇော်ရမည်။ မီးကျည်မီးပန်းတို့နှင့် တိုင်တန်းပသလျှင်လည်း၊ မိုးလေဖြောင့်မှန်၍ ချောင်းကန် ပြည့်လျှံအောင် ရွှင်လန်းမစ ကြည့်ရှုရမည်အကြောင်း။
ဥပါခက်မ အားလည်း- ခွင့်တောင်းပြောဆို ကြေအေးရှိပြီးနောက် မောင်ဖြစ်သူ ငရဲနွဲ့နတ်ကဲ့သို့ နှစ်စဉ်မပြတ်၊ တင်ကြားပသမည်။ ကြီးကျယ်သော ရေကန်ဘောင်တစ်ခု တူးလုပ်တက် ဆည်ပေးပါ တောင်းပန်ကြလျှင် သားတော် သမီးတော် တို့လက်ထက် ပြည်သူဆင်းရဲသားတို့ လုပ်စား မှီတင်းလောက်အောင်၊ တောင်မြောက်ခရီးတာ ၄၀၀၀၀ ရှည်လျားသော ရေကန် ဘောင်ကြီးကို တစ်ညဉ့်တွင်းနှင့် ဆည်ဖို့တူးလုပ်၍ ပြီးစီးသည်။ ထိုကန်ရိုးကို ဘီလူးမကန်ရိုးဟု ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ပြည့်ရှင်မင်းမှစ၍ ပြည်သူမှူးမတ်တို့သည်လည်း တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ဘီလူးမကန်ရိုးသို့ ရောက်လျှင် အမွှေးအထုံ နံ့သာရည် ပန်းရည်စသည်တို့ဖြင့် တင်ကြားပသ ရသည်။ ထိုကသွားမှ ငမင်တောင်ရိုး၊ ငရဲနွဲ့နတ်ကြီးကို မီးကျည်၊ မီးပန်းတို့ဖြင့် တင်ကြားပသရ သည်။
သက်တော်ရ- ဘုရားဒါယကာ အနိစ္စရောက်ခြင်း
ထိုမင်းသည်လည်း ဥပါခက်မကို ချစ်ခင်ရင်းစိတ်၊ ယိုဖိတ်သော စေတနာသည်၊ ထပ်ကာထပ်ကာ ပွားသဖြင့် မှောက်မှား သတ်ဖြတ်မိသော အကြောင်းကို၊ ရှေးနှောင်းပြန်လှန်၊ အတန်တန် အောက်မေ့၍၊ တမြေ့မြေ့သော ဒုက္ခ ဖိစီးလှသဖြင့် နန်းစည်းစိမ် ၆၀ နှစ်တွင် အနိစ္စရောက်တော်မူလေသည်။
ထိုမင်းကား ပုဂံပြည်၊ကျီစိုးမင်း၊ စုက္ကတေးမင်း၊ နော်ရထာမင်းတို့နှင့်နန်း ပြိုင်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် ဘီလူးမဖြစ်သော ကိုယ်လုပ်တော်က ဘွားမြင်သော သားတော် ဆင်ဖြူရှင်မင်း နန်းတက်တော်မူသည်။
တရံရောအခါ မြို့ဦးစည်းခုံတော်ကြီးကို ဖူးမြော်စည်းဝေး နေထိုင်စဉ် ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် သူတော်တစ်ဦး၊ မင်းရှေ့တွင် ရပ်ပြီးလျှင် " တရုကော မ-မလံ " ဟုဆိုလျက်၊ ထွက်သွားလေ၏။ ထူသူတော်သွားသော အရပ်သို့ လိုက်ကြည့်စေရာ- တစ်ခုသော သစ်ပင်အောက်တွင် ပျောက်သွားလေ၏။ ယင်းသို့လျှင် ပျောက်သွားသော သစ်ပင်အောက်၌လည်း နှစ်မိုက်ခန့် ရှိသော ညောင်ပင်ငယ် တခုကိုမှီလျက် ပတ္တမြားသုံးရစ် စီရင်သော လက်ခြောက်သစ်ခန့် ရွှေသားရုပ်ရှင် တစ်ဆူတွေ့ရှိရသည်။ ထိုမင်းလည်းကြက်သီး ဖြန်းဖြန်းထလျက် မှူးမတ်တို့ကို မေးတော်မူရာ……… ‘’ဘုန်းကြီးသော အရှင်၏ ကုသိုလ်တော်သည်၊ နှိုးဆော် ချီးမြောက်ချိန် ရောက်သည်ဖြစ်သောကြောင့် ထောက်ပံ့ကူညီထိုက်သော စတုလောကပါလ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ ညွှန်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတော့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်-
တရုကောမ-မလံ ဟူသောအပုဒ်၌……. တရုကောမံ+အလံ ဟု ပုဒ်ဖြတ်ရပါသည်။
တရု = လုင်ပျိုဖြစ်သော ပြည့်ရှင်မင်း၊
ကော = သင်မှတပါး အခြားသောသူသည်၊
မံ = ငါဘုရားကို၊
အလံ = ကိုးကွယ်ထိုက်ပါအံ့နည်း။
ဤသို့အနက် မြန်မာပြန်ဆိုချက်များနှင့် အမတ်ကြီးလျှောက်ထားလျှင်…… အားရနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ မဟာဗောဓိ ပင်နှင့် ရုပ်ရှင်တော်တွေ့သောအရပ်တွင် ကမ္ဘာမြင့်ရှည်တည်ပါစေသော်ဟု- အဓိဌာန်ပြုပြီးလျှင် ဗောဓိရုပ်ရှင်တော်များကို ဌာပနာ၍ စေတီတစ်ဆူ တည်တော်မူသည်။ ထိုစေတီတော်ကို သူတော်ပေးရင်း အမည်အတိုင်း တရုကောဘုရားဟု သမုတ်တော်မူသည်။ ယခုစကားရွေ့လျောသဖြင့် တရုပ်ကော ဟုတွင်သည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော် ကျော်စွာမင်း သက္ကရာဇ် ၅၃၀ ပြည့်တွင်၊ နန်း တက်တော်မူသည်။ ပုဂံပြည် မင်းရှင်စော၊ ကုလားကျမင်းတို့နှင့် နန်းပြိုင်။ စည်းစိမ် ၅-လတွင် ကျောက်ပေါက်ရောဂါနှင့် အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော် မင်းခေါင်ငယ် သက္ကရာဇ် ၅၃၆ ခုနှစ်တွင်၊ သက်တော် နှစ်ဆယ်အရွယ်တွင် နန်းတက်တော်မူသည်။ တရံရောအခါ၊ ပုဂံပြည် နရပတိစည်သူမင်းက တောင်တွင်းကြီးမြို့ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းယူမည်ဟု ဗိုလ်(၂၀၀၀၀) နှစ်သောင်းနှင့် ချီလှာကြောင်းကို ကြားသိတော်မူ၍ မှူးမတ်တို့နှင့်တိုင်ပင်ရာ- ‘’လုလင်မြို့တွင် ကောက်နယ်တလင်းခန့်အောင်မြေကွက်ရပ်ရှိကြောင်းကို ကြားဘူးပါသည်။ ထိုမြို့ အောင်မြေရှိရာ အရပ်က စံတော်မူ၍ ခံရမှ၊ ပုဂံပြည်က ရန်ကို ခုခံ အောင်မြင်ရာပါသည်’’ ဟုလျှောက်ထားလျှင်- မင်းခေါင်ငယ်သည် လူ ၂၀၀၀၀နှင့် လုလင်မြို့ကို မြေရိုးကတုတ်၊ ထပ်မံတည်လုပ်စေ၍ ဘူမိဇေယျာအရပ်က စံနေခုခံသည်။
နရပတိစည်သူမင်းလည်း- မင်းခေါင်၊ လုလင်မြို့က ထွက်၍ ဆီးကြိုခုခံလျက် ရှိကြောင်းနှင့် ကြားသိလျှင် ပုလင်းချောင်း မြောက်ဘက်တွင် ဆင်မြင်း ရေမြက် ကောင်းရာ ယင်းချောင်းကို အမှီပြု၍ တစ်မျက်နှာလျှင် တာ ၁၀၀ ခန့်ရှိသော မြေမြို့ငယ် တည်လုပ်နေထိုင်သည်။ တခါးကြီး လေးမျက်နှာမှာ…………
အနောက်မျက်နှာ- လိမ်မွတံခါး။ (လိမ်ပွတ်)
မြို့အမည်ကို ကသစ်မြို့ သမုတ်၍၊ စွဲရပ်နေထိုင်သည်။
ယင်းသို့ စွဲရပ်နေထိုင်ရှိလျှင် မင်းခေါင်ငယ်လည်း အမည်ကောင်းယောကျာ်း ငအောင်စေ ကိုအမှုထမ်းလူ(၁၀၀၀) တစ်ထောင်နှင့် ပုလင်းချောင်းတောင် ဘက်တွင် မင်္ဂလာတပ်ဦး ပြုလုပ်ခန့်ထား နေထိုင်စေသည်။ ထိုတပ်၏အနီး စီးရောက်လှာသော ချောင်းကို အောင်စေချောင်း ဟုတွင်သည်။
နရပတိစည်သူမင်းလည်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး၊ တိုက်ရေးခိုက်ရေး အခွင့်မရ၊ တစ်လကျော် ရှိသည်နှင့်၊ မိမိစွဲရပ်သောတပ်က၊ အရှေ့ကို တာ(၅၀၀) ငါးရာ ကျော်ခန့်၊ ထွက်တော်မူ၍ တောကစားရာ- ရေလာချောင်းကျ စိမ်းမြသော တောတောင်များကို မြင်တော်မူလျှင် ပုဂံပြည်ကို လွမ်းဆွတ်တော်မူ၍ ရှုမြှော်စဉ်းစား၊ ရဲမက်သား အမှုထမ်းတို့နှင့် ရေကန်တစ်ခု၊ တူးလုပ်တော်မူသည်။ ထိုအရပ်တွင်၊ ကျေးရွာတည်ထား နေထိုင်ကြသဖြင့် ပုဂံမျှော်ရွာ (ကန်တော်ရွာ) ဟု ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည်။
ထိုနရပတိစည်သူမင်းလည်း ကဆုန်နယုန် မိုးလေကျ၍ ပြင်းပြသောရွှံ့နွံ၊ အလွန်ကြီးမား တပ်သားအမှုထမ်းတို့၊ ပင်ပန်းနွမ်းရိရှိသည်ကို မြင်တော်မူသဖြင့် ပုဂံပြည်သို့ အလျင်အမြန် ဆုတ်ခွါ တော်မူသည်။
သက္ကရာဇ် (၅၅၂) ငါးရာ့ ငါးဆယ့်နှစ်ခုနှစ် နန်းစည်းစိမ် ၁၆ နှစ်တွင် ဘုရင်မင်းခေါင်ငယ် အနိစ္စရောက်လေသည်။
မင်းခေါင် အနိစ္စရောက်သော် သားတော် ဆင်ဖြူရှင်ငယ်မင်းပြုရာ စည်းစိမ် ၅-နှစ်တွင် အနိစ္စရောတော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော် စည်သူမင်း (၅၅၇) ငါးရာငါးဆယ့်ခုနှစ်၊ နန်း တက်တော်မူသည်။ ပုဂံပြည်၊ ဇေယျသိင်္ခမင်းနှင့် နန်းပြိုင်။ စည်းစိမ် ၉-နှစ်တွင် အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။
ထိုမင်းမရှိလျှင် သားတော် ၀န်တော်ကဲ ကသက္ကရာဇ် (၅၆၆)ခုနှစ် နန်းတက်သည်။ ထိုဝန်တော်ကဲမင်း သည် ပြည်ထဲရေး၌ နှလုံးပိုက် နည်းပါးသဖြင့် ဆင်းရဲသား ပြည်သူတို့ အိုးပူတွင် ထည့်ထားသော နှမ်းပေါက်ပေါက် နှင့်အတူ ရေ ဆူရိပ်မမြင်၊ ပူပင်များပြား၍ ပြည်မြို့၊ တောင်ငူမြို့၊ ပုဂံမြို့များသို့ထွက်သွား ခိုမှီးကြကုန်သည်။ ထိုအကြောင်းများကို ပုဂံပြည် ဇေယျသိင်္ခမင်း ကြားသိတော်မူလျှင် အမတ် မုနိကျော်ထင်ကို ဗိုလ် နှစ်သောင်းနှင့် ချီတက်သိမ်းယူစေရာ သားမယား နှင့်တကွသော ၀န်တော်ကဲမင်းကို ချ၍ စည်းစိမ် ၂ နှစ်တွင် အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။
ထိုတွင်မှ ရမည်းသင်းစား သီဟပတေ့ ကို ၀န်ခန့်ချထားသည်။ ၃ နှစ်ရှိ လျှင် သီဟပတေ့ကွယ်လွန်ခဲ့၏။ ယင်းနောက်တောင်တွင်းကြီးမြို့ မှာ အအုပ်အထိန်းမရှိ၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်၊ လူနေ လူနေ အိမ်ခြေ နည်းလျော့ ပျက်ပြား သဖြင့် တောအတိ ဖြစ်၍နေသည်။
ဤသည်ကား တတိယအကြိမ် တောင်တွင်းကြီးမင်းဆက် တဖန် ပြတ်ခြင်းတည်း။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:13 AM